Knowledge Archives - Neo Mars International
November 7, 2021 June 11, 2022 by adminin Articles, Knowledge
October 27, 2021 November 7, 2021 by adminin Articles, Knowledge
အဆင့်မြင့်ပညာကို ဆက်လက်ဆည်းပူးရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ ပြဌာန်းထားချက်အရ ကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ (၁၂) နှစ် ကြာ တရားဝင်ပညာရေး ပြီးမြောက်မှု ရှိထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
မူလတန်း – elementary education –6years
အလယ်တန်း – lower secondary school –3years
အထက်တန်း – upper secondary school-3years
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီးပညာဆည်းပူးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ (၅) မျိုးထဲက တစ်ခုခုထဲကို ဝင်ရောက်ဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။
Professional training colleges (postsecondary course of specialized training colleges)
National Institution for Academic Degrees and University Evaluation (NIAD-UE) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော Junior College သို့မဟုတ် နည်းပညာကောလိပ်တစ်ခုခုမှ အထူးပြုမေဂျာများကို လေ့လာခြင်းပြီးဆုံးခဲ့ပါက “Bachelor’s Degree” ကို ရယူရန် ထပ်မံကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ NIAD-UE မှ ပြုလုပ်သော စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လျှောက်ထားမယ့် College ကို NIAD-UE မှ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း ရှိမရှိ အသေအချာ စုံစမ်းသင့်ပါတယ်။
ဘွဲ့လက်မှတ်များရရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပညာသင်နှစ်ကြာချိန်များ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပညာသင်နှစ်များကို များမှာ စတင်လေ့ရှိပါတယ်။ ပညာသင်နှစ်တစ်ခုရဲ့ သက်တမ်းကို ပိုင်းဖြတ်ရာမှာလည်း semester စနစ်ကို ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ပညာရေးအတွက် ယေဘုယျ ပညာသင်နှစ်ကြာချိန်များ
ဘွဲ့လွန်ပညာရေးအများစုကိုတော့ ပထမဆင့် (၂) နှစ်နဲ့ ဒုတိယအဆင့် (၃) နှစ်ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ ဆေးပညာ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာနှင့် အခြားဆေးဘက်နှီးနွယ်ပညာရပ်များကိုတော့ ပညာသင်နှစ် (၆) နှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုးရိုး ‌ဆေးပညာဘွဲ့တွေအတွက်ပါ။ ဆေးပညာ ဘွဲ့လွန်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် (၄) နှစ် ထပ်မံ ပညာသင်ယူဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုအတွက် ဘွဲ့ရယူဖို့ ပညာသင်နှစ်ကို (၅) နှစ်အဖြစ် အများစုက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသားများအနေနဲ့ တတိယနှစ်ကနေ ဝင်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်များလည်း ရှိပါတယ်။
ပိုကြီးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကတော့ ဝင်ခွင့်လက်ခံတာနဲ့ ကျောင်းပညာသင်နှစ် တစ်ဖြတ်စတာကို နွေဦး (Spring) နဲ့ ဆောင်းဦး (Fall) ဆိုပြီး ပိုင်းဖြတ်လက်ခံကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီလိုကျောင်းကြီးတွေရဲ့ ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနံပါတ်တွေမှာ SP, FA ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး အတိုကောက်တွေနဲ့ စတင်ပြီး ကျောင်းဝင်ချိန်ကိုပါ ကျောင်းသားကဒ်ကနေ သိအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်တွေ ရှိသလိုပဲ ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း ကျောင်းပိတ် ရက်ရှည်တွေရှိပါတယ်။
ဂျူလိုင်လကုန် ～ စက်တင်ဘာလဆန်း
ဒီဇင်ဘာလကုန် ～ ဇန်နဝါရီလဆန်း
ဖေဖေါ်ဝါရီ ～ မတ်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ အရေအတွက်
အောက်က ဇယားပုံကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (MEXT) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်ရဲ့ စစ်တမ်းကဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အရေအတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Data from the 2020 School Basic Survey by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
MEXT ဆိုတာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးဌာန (၁၁) ခုထဲက အစိုးရဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရှည်က Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (文部科学省, Monbu-kagaku-shō) ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုကောက် MEXT ကို ဂျပန်လို Monka-shō လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
Outline of the Student Exchange System（Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(MEXT)
The Japanese Education System (NIC-Japan)
October 14, 2021 May 19, 2022 by adminin Articles, Knowledge
ဟော်လိုဝင်ပွဲကိုတော့ နှစ်စဥ် တိုကျိုမှာ စည်စည်ကားကား ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။
ကိုရိုနာကပ်ဘေးကာလတုန်းကတောင် VR တွေနဲ့ ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် တချို့သူတွေကတော့ ရဲတွေ အရမ်းတားနေတဲ့ကြားထဲကကို ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ထွက်လာကြတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကဆိုရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ ပုံစံမျိုးစုံဝတ်စား ဆင်ယင်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အမျိုးမျိုး နှာခေါင်းရှုံ့နေခဲ့ကြပါသေးတယ်။
Shibuya က ဟော်လိုဝင် (source – tokyofashion)
ခုခေတ်တွေမှာတော့ အဝတ်အစားတွေ အဆင်အယင်တွေတင်သာမက အခြားအရာအချို့ပါ ပြောစရာလေးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေပါ ဟော်လိုဝင်ဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်းယဥ်ကျေးမှုထဲကို ကိုယ်တိုင်စီးပါနေကြပါပြီ။
တိုကျိုမှာတော့ ဒီဇိုင်းအစုံနဲ့ ဝတ်စုံတွေပြင်ဆင်ပြီးရောင်းချနေတာမျိုးကို အောက်တိုဘာလရဲ့ ပထမအပတ်လောက်ကတည်းကနေ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ တချို့ ဟော်လိုဝင်အကြိုပါတီလေးတွေကို ပိတ်ရက်တွေမှာ စလုပ်နေကြပါပြီ။
— インスタ泥棒 (@sudokeeeeen) October 25, 2014
ကလပ်တွေ၊ ဘားတွေနဲ့ လက်လီစတိုးဆိုင်လေးတွေ၊ ခပ်‌ပေါပေါကလေးကစားစရာလေးတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေကတော့ ဟော်လိုဝင်ကို ဆိုင်အပြင်အဆင်မျိုးစုံပြောင်းပြီး ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ရောင်း၊ ငွေ သဲ့ယူကြတာပါ။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးနဲ့ ခရစ်စမတ်ပွဲရက်တွေလိုပဲ ဟော်လိုဝင်ပွဲဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာအောင် ယဥ်ကျေးမှုတွေ သွတ်သွင်းကြတဲ့ အထဲမှာ ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ စနက်လည်း အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေအတွက်ကတော့ ဘာပွဲဖြစ်ဖြစ် မားကတ်တင်းလုပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်‌ဆောင်မှုတွေကို ရောင်းရဖို့ အဓိကဆိုတော့ တပြိုင်နက် ဝိုင်းတွန်းကြတာမှာ အတော်လေး တာ သွားတာပါ။
ဂျပန်စတိုင် အနောက်တိုင်းပွဲတွေကတော့ မူရင်းပုံစံတွေနဲ့ အတော်ကွာသွားတာပါ။ ဂျပန်မှုပြုခံရတယ်ပဲ ဆိုကြပါစို့။ (ဥပမာ – ခရစ်စမတ်ကာလတွေမှာ စုံတွဲတွေဟာ အလွန်စျေးကြီးတဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ချိန်းတွေတဲ့ အလေ့အထလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေက မားကတ်တင်းနဲ့ စပေးလိုက်တဲ့ အလေ့အထပါပဲ။)
အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကစတင်တဲ့ ပွဲတော်တွေဟာ ဂျပန်အရောက်မှာ အသွင်ကွဲထွက်သွားတယ် ဆိုပေမယ့် တူနေတဲ့ အချက်တွေလည်း အတော်များများ ရှိပါသေးတယ်။
ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ ဝင်ငွေတွေရဖို့အတွက် အချိန်ကိုက်လုပ်ဖို့ ပလန်တွေချတယ်။
အဲဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကပဲ ဘယ်ပိတ်ရက်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ဘယ်သွားသင့်တယ်၊ ဘာဝယ် ဘာစားသင့်တယ်ဆိုတာကို အမျိုးမျိုး ကြော်ငြာတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ဆွဲဆောင်တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီကာလ၊ ဒီအချိန်ဆိုရင် ဒါမျိုးဟာ စားနေကျ၊ သွားနေကျ၊ ဝယ်နေကျဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ ဘေးဘီကလူတွေကလည်း ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာမို့ သူများတွေတောင် လုပ်နေပြီ၊ ငါတို့မလုပ်သေးဘူးလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ မိသားစုတွေ၊ စုံတွဲတွေမှာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဟော်လိုဝင်ဆိုတာတော့ တတိယမြောက်အဆင့်ကို ရောက်သွားပြီလို့ ယူဆရင် ရလောက်မှာပါ။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ မားကတ်တင်း ကြော်ငြာတွေထဲမှာ ဟော်လိုဝင်ဆိုတာကို “အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူကြီးတွေအတွက် ဘယ်လိုပဲ သောင်းကျန်းသောင်းကျန်း Ok တယ်” ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်ကို ဆက်တိုက်ထိုးသွင်းနေကြတာပါပဲ။
ဘားတွေ၊ နိုက်ကလပ်တွေနဲ့ အခြား အရောင်ရင့်လုပ်ငန်းတွေကတော့ ပိုက်ဆံရှာဖို့ အခွင့်အရေးလို့ပဲ ကြိမ်းသေတွက်ကြတာပါပဲ။ သူတို့တွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေက နှစ်စဥ်ဆိုသလို ဒီနှစ်က အမိုက်ဆုံး၊ ဒီနှစ်က အလန်းဆုံး၊ ဒီနှစ်သာ အကြမ်းဆုံးလို့ ကြော်ငြာနေကြတာပါ။
ဟော်လိုဝင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့အချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနည်းစုအင်အားလေးနဲ့ ဂျပန်မှာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ငွေကျည်ဆံတွေ ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့ မားကတ်တင်းစစ်ပွဲမှာတော့ လွတ်‌အောင်ရှောင်ကြဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
ဟော်လိုဝင် : ‌Cosplay ပွဲအကြီးစားတစ်ခု?
အနောက်တိုင်းပုံစံတွေကနေ ဂျပန်ရောက်မှ နည်းနည်းပိုကဲလာတဲ့ အပိုင်းကို ဟော်လိုဝင်မှာ တွေ့ရမှာပါ။
ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုနဲ့ အကိုက်ဆုံးပဲလို့ ဆိုရမလား၊ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ တူအောင် လိုက်ပြီး ဝတ်စုံတွေဝတ်ကြ၊ ဆင်ယင်ကြတဲ့ cosplay အပိုင်းက ဂျပန်မှာ တော်တော်လေး ပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူကြီးတွေလုပ်ကြတဲ့ cosplay တွေပါ။
Tokyo Shibuya Halloween 2018 wooo! 😂😎🎃🎉
Found Ness and Link!🕷️👻🎃 pic.twitter.com/pSPihWsYqJ
— Gaijin Gaming Bros (GGB) (@GGBJapan) October 27, 2018
Shibuya ဆိုရင် ဟော်လိုဝင်နေ့မှာ ဂိမ်းတွေ၊ anime တွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ စာအုပ်တွေထဲက ဇာတ်ကောင်မျိုးစုံရဲ့ ပါတီပွဲလို့တောင် ခေါ်ရမှာပါ။ လူထောင်ပေါင်းများစွာလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်မလွန်လောက်ပါဘူး။ Live Cam တွေကနေပြီး တိုက်ရိုက်ကြည့်နေသလို၊ ဂျပန်ရဲ့ သတင်းမီဒီယာကြီးတွေ၊ ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကို တော်တော် စည်စည်ကားကားရှိလှပါတယ်။
カワハロ マリオチーム #カワハロ pic.twitter.com/aN5uzgsj1t
— こまつよしお (自由廊) (@komayo_j_u_r) October 26, 2014
10/31/2018 – Shibuya Halloween street party! pic.twitter.com/zE46ZBE07g
— Beardedguy (@Beardedguu1) November 3, 2018
လူတစ်ယောက်ကို fashionsnap.com က အင်တာဗျူးထားတာမှာ သူ့အနေနဲ့ ဟော်လိုဝင်နေ့မှာ “ပုံမှန် ရုံးဆင်းလာတဲ့ အဝတ်အစား” နဲ့ လူအုပ်ထဲ ဖြတ်လျှောက်တာမှာ နည်းနည်းတောင် ရှိုးတို့ရှန်းတန့်ဖြစ်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်တွေက မလုပ်ရင်လည်း မလုပ်ပါဘူး။ လုပ်ပြီဟေ့ဆိုရင်လည်း အပြတ်အသတ်သာအောင် လုပ်တဲ့ သဘောမျိုးကတော့ အတော်များများမှာ တွေ့ရပါတယ်။
— まっせー♛ (@mase_1213) October 26, 2014
ဟော်လိုဝင်ပွဲဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံက ခရီးသွားတွေ ပွဲကြည့်ဖို့သက်သက်ကို တိုကျိုကို လာလည်ကြတာ အများအပြားပါပဲ။
မှန်ပါတယ်။ အထူးအဆန်း ဝတ်စုံအဆင်အယင်တွေနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ကျင်းပကြတာ ပျော်စရာပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ ရှိပါသေးတယ်။
အရက်သောက်ထားတဲ့ လူငယ်တွေ စုရုံးစုရုံးနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပြီဆိုရင်တော့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်သွားကြတဲ့ အပိုင်းလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဂျပန်မှာကတော့ ပွဲတော်တွေမှာ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း မရှိကြပေမယ့်၊ နဂိုတုန်းက သန့်ရှင်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမှိုက်ပွလာရင်တော့ နည်းနည်း အသံထွက်လာမှာပါ။
အမှိုက်ပွတဲ့ ဟော်လိုဝင် (Source: @A_Lvl7)
ဂျန်မှာ ဟော်လိုဝင်ပွဲ အလိုမရှိ၊ “NO MORE HALLOWEEN IN JAPAN!” ဆိုတဲ့ လူအုပ်ကလည်း သပ်သပ်ရှိနေပါတယ်။ မမြင်မတင့်တယ်တာ တစ်ခုခု တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီလူအုပ်က အင်တာနက်ဖိုရမ်တွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ပေါ်လာတတ်တာပါပဲ။ အမှိုက်ပွနေတဲ့ လမ်းကြားတွေ၊ ဘီယာဘူးခွံတွေ၊ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ အပေါစား ပလတ်စတစ်ကစားစရာအမှိုက်တွေပွနေတဲ့ တိုကျိုက မြင်ကွင်းတွေကို ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ပုံတွေရိုက်ပြီး အထင်အမြင်မျိုးစုံနဲ့ မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုကြတာပါ။
Twitter ထဲမှာ @mitaka_cos အမည်နဲ့ တင်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ထဲမှာဆိုရင် သူက Shibuya က အများသုံးအိမ်သာထဲမှာ သွေးတွေတွေ့လို့ တော်တော်အော်ဂလီဆန်သွားပါတယ်။ (ဟော်လိုဝင်မှာ သုံးကြတဲ့ သွေးအတုတွေပါ။) ဒါပေမယ့် သူ့အပြောအရ ဒီတိုင်းထားခဲ့ဖို့ မနေတတ်တာမို့ အိမ်သာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ လူတချို့ အိမ်သာထဲကို ဝင်လာပါတော့တယ်။ မယုံနိုင်စရာ အဲဒီလူအုပ်က သွေးအတုတွေ ပေနေတဲ့ အခြားဟော်လိုဝင် ဝတ်စုံတွေကိုပါ ကမ်းပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမလားလို့ ခိုင်းပါတော့တယ်။ သူလည်း စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ အော်ပြောလိုက်တော့ အဲဒီလူအုပ်က ပြန်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆင်ခြေကတော့ “ဒါဟာ ဟော်လိုဝင်ပဲလေ။” ဆိုပြီး အဆုံးသတ်မှာ ပြောသွားတာပါ။ အဲဒါကို Twitter မှာ ပိုစ်တင်ခဲ့တဲ့ ကာယကံရှင်က အတော်လေး မကျေမချမ်းဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲ။
ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပြီး အပေါ်ကလို အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ အပြုအမူတွေကို ခပ်စိပ်စိပ် အင်တာနက်ဖိုရမ်တွေထဲမှာ တွေ့လာရပါတယ်။ ပိတ်ရက်ပဲလေ၊ အပျော်ပေါ့ဆိုပြီး တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်တွေလည်း များလာပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်လုပ်ရင်သတင်းတွေကြားထဲ ပျောက်သွားပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမှာ ပါလာနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တာပါ။
အပေါ်က အဖြစ်အပျက်ထဲက လူအုပ်ဆိုရင် လူဆိုးတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စည်းကမ်းရှိပြီး တကယ်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ သူတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ်အပျက် အခိုက်အတန့်လေးတစ်ကြောင့် လူဆိုးပုံဖေါ်ခံရတာမျိုးကျတော့ တကယ်နစ်နာပါတယ်။
လူတွေသန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်၊ အမှိုက်တွေကောက်ကြတယ်ဆိုတာ ဂျပန်မှာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာထက်ကို သန့်ရှင်းရေးဆိုတဲ့ အယူအဆက ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုထဲမှာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
ဟော်လိုဝင်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေးနေကြတဲ့ ဂျပန်လူငယ်များ (Source: Shibuya_akkun)
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲတွေတုန်းက ပွဲလာကြည့်ကြတဲ့ ဂျပန်တွေ ဘောလုံးပွဲကြည့်စင်တဝိုက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်သွားတဲ့ ကိစ္စကလည်း အတော်လေး နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြတဲ့သူတွေက ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒီအတိုင်း လုပ်အားလာပေးကြတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ဓာတ်ပုံတွေတင်ကြပါတယ်။ အမှိုက်ပစ်မိတဲ့သူတော့ အဲဒီလို ပုံတွေမြင်ရင် ရှက်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုထဲမှာတော့ ရှက်ခြင်းနဲ့ အပြစ်ရှိသလိုခံစားရခြင်းဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း အတော်များများပါဝင်ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေးပိုစ် (Source: Shibuya_akkun)
‌ဟော်လိုဝင်မှာ ပျော်ကြပါးကြတာ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လိုက်နာရမယ့် အပိုင်းလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ Shibuya ကိုတော့ ပွနေအောင် မလုပ်ခဲ့ပါနဲ့။
အမှိုက်ကို အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ရမယ်ဆိုတာကို မူလတန်းကလေးတောင် နားလည်ပါတယ်။ အပျော်အပါးအတွက် ဘာပဲလုပ်လုပ် Ok နေပြီလား?
လောလောဆယ် မနေ့ညက အားလုံးဖွထားတဲ့ အမှိုက်တွေကို Shibuya က လူငယ်တွေက ရှင်းနေပါပြီ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေး ပိုစ် (Source: su___77)
Shibuya က အမှိုက်တွေကို ရှင်းခဲ့ပါပြီ။ ( ´ ▽ ` )ﾉ
ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခုတည်းနဲ့ ဘေးဘီကို လူတွေ ဒီလောက်အထိ ဂရုမစိုက်ပဲနေမယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ အမှိုက်တွေ ပွချင်ပွပါစေ၊ ဂရုမစိုက်ပေါင်ဆိုတာက တကယ်ကို အံ့အားသင့်စရာပဲ။ ခုမနက်ပိုင်းအထိကို ညက ဝတ်စုံတွေနဲ့ လမ်းတွေလျှောက်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်တွေ အမှိုက်တွေသိမ်းနေတာကို သူတို့ မြင်ပြီး တစ်ခုခုတော့ ခံစားမိကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အမှိုက်တွေ ဆက်သိမ်းနေပါပြီ။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေးတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေက တကယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလုပ်အားပေးအဖွဲ့တွေကို ကြောင်သူတော်တွေလို့ သမုတ်ကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Twitter ထဲမှာ @hawk_kaito ဆိုတဲ့ အကောင့်နဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ရေးခဲ့ပါတယ်။
ゴミ 拾あろいしてることをわざわざ 自分じぶんでTwitterにあげる人って、「 私わたしゴミ 拾あろいしてるよ！ほら、 偉えらいでしょ！ 褒ほめて 褒ほめて！」って 感かんじなんだろうな
လမ်းပေါ်က အမှိုက်တွေကို ရှင်းပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Twitter ထဲ ကိုယ့်ဖာသာတင်ပြီး ဂုဏ်ဖေါ်နေတာက “နင်တို့ အမှိုက်တွေကို ငါရှင်းပေးတာနော်၊ ငါ့လောက် ကောင်းတဲ့သူရှိဦးမလား?” ဆိုပြီး ဂုဏ်ဆာနေကြတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလား။
ပြီးတော့ အကောင့်ဖျက်သွားတဲ့ @takumi_cast ဆိုတဲ့ အကောင့်နာမည်နဲ့ သူကလည်း အောက်ပါအတိုင်း တင်ခဲ့ပါတယ်။
自分じぶんでボランティアしましたとか ゴミ 拾あろいしましたとか ましてや、 ダメな 人ひとと 比くらべて 自分じぶんは 好いい 人ひとですよアピールする 人ひとは 絶対ぜったいに 偽善者ぎぜんしゃ。 偽善者ぎぜんしゃ＝ 悪魔あくまぢゃけぇ、うざい。
ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် လုပ်အားပေး အမှိုက်သွားရှင်းပြီးမှ ငါတော့ အမှိုက်တွေ ရှင်းနေပါပြီနော်ဆိုပြီး လုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုးဟာ ငါက သူများထက်သာတယ်ဟ ဆိုပြီး ပြချင်နေတဲ့ သူတွေပါပဲ။ ကြောင်သူတော်တွေပါ။ အာရုံတွေနောက်…
တကယ်တော့ Facebook ထဲမှာထက် Twitter မှာ ပိုပြီးတော့ ကွန်မန့်တွေက ကြမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတော်များများကတော့ သူတို့ တင်ခဲ့တာတွေ လူသိနည်းနည်းများလာရင် အကောင့်ဖျက်လိုက်ကြတာများပါတယ်။
ဒါကလည်း ဂျပန်မှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိပေမယ့် အဲဒီအနောက်မှာ ဝာာဝန်ယူရမှုတွေပါ ကပ်လိုက်လာတာကြောင့်ပါပဲ။
ယာကူဇာတွေလောက် ဂျပန်လူမျိုးစွဲကြီးတာ ယာကူဇာတွေပါပဲ။ ဂျပန်ကို ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားယဥ်ကျေးမှုတွေကို ယာကူဇာတွေဘက်က အချိန်တိုတွင်း လက်ခံဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။
လူကြီးတွေကတော့ ယာကူဇာတွေပါဝင်လာပြီဆိုရင် ရှောင်ကြ၊ ကြောက်ကြပေမယ့်၊ ကလေးတွေကတော့ လုံးဝ မမှုပါဘူး။
ယာကူဇာတွေပေးတဲ့ ဟော်လိုဝင်လက်ဆောင်တွေကို ဝင်ယူနေကြတဲ့ ကလေးငယ်များ (Source: Tomohiko Suzuki)
Yamaguchi-gumi (ဂျပန်ရဲ့ အကြီးဆုံး ယာကူဇာအဖွဲ့တွေထဲက တစ်ခု) ဆိုရင် မူလတန်းကျောင်းသားလေးတွေအတွက် ဟော်လိုဝင်လက်ဆောင် ချိုချဥ်လေးတွေ၊ ကစားစရာလေးတွေကို ယာကူဇာ ထိပ်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကို သုံးပြီး ဝေပေးနေတာမျိုးလုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယာကူဇာတွေက နည်းနည်းတော့ ဟော်လိုဝင်မဆန်သလိုပါပဲ။ တစ်ယောက်မှ ဟော်လိုဝင် ဝတ်စုံတွေနဲ့ မဆင်ယင်ထားကြပါဘူး။
“Trick or Treat” ဆိုတဲ့ ဟော်လိုဝင်မှာ အနောက်တိုင်းကလေးတွေ ကစားကြတာမျိုးက ဂျပန်မှာ ခေတ်သိပ်မစားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မုန့်ပေးတာကိုတော့ ဘယ်ကလေးမဆို အလွန်ပျော်ကြပါတယ်။
その 菓子かし 配くばるためにどんだけ 若わかいもんの 血ちが 流ながれたかわかっとんのかい！
ဒါမျိုးလေးတွေ ယာကူဇာက လုပ်ပေးဖို့ လူငယ်တွေ ဘယ်လောက် သွေးမြေကျခဲ့ရသလဲ သိလား?
子供こどもが 間違まちがっていくなら 分わかるけどベビーカーを 押おした 母親ははおやが 自分じぶんから 行いくってどうなの？w
ကလေးတွေ သူ့ဘာသာသူ မုန့်သွားယူတာကတော့ ထားပါတော့။ တွန်းလှည်းနဲ့ အမေကပါ ယာကူဇာတွေဘက်ကို လှည့်နေတာပဲ။ ဟ ဟ
အပေါ်ကပုံကိုမြင်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတော့ အမျိုးမျိုး ထင်မြင်ချက်တွေပေးကြပါတယ်။
ခုလိုမျိုး ယာကူဇာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ အလှူအတန်းတွေလုပ်ပြတာက ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လှူတန်းပြပြီး လူထုက သူတို့အပေါ်ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေကို ပျော့ပျောင်းလာအောင် လုပ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ဗျူဟာတစ်ခုပါပဲ။ နှစ်သစ်ကူးတွေမှာဆိုရင် otoshidama お年玉おとしだま လို့ ခေါ်တဲ့ ကလေးတွေကို မုန့်ဖိုးတွေစာအိတ်တွေနဲ့ ထည့်ပြီးပေးတဲ့ ပွဲတွေမှာလည်း သူတို့ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ပါဝင်ကြပါတယ်။ ကုတ်အင်္ကျီအမည်းတွေနဲ့ လူကြီးတစ်အုပ်က ရောက်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က ကလေးတွေကို ယန်းတစ်သောင်းကနေ သုံးသောင်းလောက်ထည့်ထားတဲ့ စာအိတ်လေးတွေ ဝေတာမျိုးပါ။ ဒေါ်လာနဲ့ဆို ဒေါ်လာ တစ်ရာကနေ ဒေါ်လာ (၃၀၀) လောက်ပါတဲ့ စာအိတ်တွေ‌ပေါ့။ (ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ ရဲတွေရောက်လာပြီး မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ပါလိမ့်မယ်။)
တချို့ နည်းနည်းရွှတ်နောက်နောက် နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း အဲဒီလိုမျိုးတွေမြင်ရင် နည်းနည်းပေးပါလို့ သွားကြလေ့ရှိပါတယ်။ သဘောကောင်းတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ပေးသွားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သတိထားတာ ကောင်းပါတယ်။
(၁၉၉၅) ခုနှစ် Kobe မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Hanshin ငလျင်ကြီးတုန်းကဆိုရင် Yamaguchi-gumi ဟာ ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထိအခိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို အ‌စောဆုံးရောက်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ်ရိက္ခာတွေ၊ ဆေးဝါးတွေကို ငလျင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဂျပန်လူထုအတွက် ကူညီခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၁) ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီတုန်းကဆိုရင်လည်း Yamaguchi-gumi ရဲ့ နယ်မြေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းဆိုသလို ထရပ်ကား (၂၅) စီးနဲ့ အပြည့် ဆေးဝါးတွေ၊ အရေးပေါ်အကာအရံတွေ၊ ရိက္ခာတွေကို ဂျပန်ပြည်သူလူထုအတွက် ကူညီခဲ့ပါသေးတယ်။ တချို့ကတော့ Yamaguchi-gumi ရဲ့ လုပ်ရပ်က လူထုကို သွေးဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေးယူ စတန့်ထွင်တာလို့ ပြောပေမယ့်၊ တချို့ကတော့ နည်းနည်း သဘောကျသလို ရှိပါတယ်။
ဟော်လိုဝင်ပွဲဟာ ကိုဗစ်ကာလမှာတောင် virtual Shibuya ဆိုပြီး အွန်လိုင်းကနေ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဂိမ်းတွေ၊ ရှိုးပွဲတွေလည်း ပါပါတယ်။
တစ်ခုကောင်းတာက အမြဲလိုလို အမှိုက်ပွတယ်ဆိုပြီး ခဏခဏပြောလေ့ရှိတဲ့ ဟော်လိုဝင်ဆန့်ကျင်တဲ့ အုပ်စုကတော့ (၂၀၂၀) အွန်လိုင်း ဟော်လိုဝင်ပွဲမှာ ပြောစရာမရှိအောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်က လူတွေ ပျော်ရွှင်ကြတာဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ တစ်ပါးသူကို မထိခိုက်စေသင့်၊ အနှောင့်အယှက်တော့ မဖြစ်စေသင့်ပါဘူး။
ယာကူဇာတွေ ဟော်လိုဝင်ထဲပါလာတာလည်း တကယ်က ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ဟော်လိုဝင်ဝတ်စုံအနေနဲ့ ယာကူဇာဝတ်စုံဆိုပြီး တသီးတသန့်ချုပ်ဝတ်စရာ လိုလောက်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဟော်လိုဝင်ပွဲကို ကလေးတွေ များများပါဝင်ပြီး ပျော်ရွှင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း ပိုကောင်းမှာပါ။
ဂျပန်ရဲ့ ဟော်လိုဝင်ပွဲကတော့ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပုံစံမျိုးစုံ၊ အိုင်ဒီယာမျိုးစုံနဲ့ ပြောင်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါပဲ။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကလည်း ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရောင်းရအောင် အမျိုးမျိုး ဆက်လက်ကြံဆောင်နေကြဦးမှာပါ။
လူတွေကလည်း ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ဝယ်ယူနေကြဦးမှာပါပဲ။
ထူးခြားဆန်းပြား Chindougu များ
September 26, 2021 November 13, 2021 by adminin Articles, Knowledge
အသုံးမဝင်ရဘူး။ ဒါပေမယ့် အသုံးမကျတာလည်း မဟုတ်ရဘူး။ သုံးလည်းသုံး မနေရဘူး။ သုံးကြည့်ရင်လည်း သုံးလို့ရရမယ်။ ဒီလို ပစ္စည်းတွေကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ Kenji Kawakami ကတော့ chindougu ဆိုတာ “un-useless” လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။
Chindougu ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတာကတော့ ကြည့်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အောက်က ဗီဒီယိုကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Chindougu 珍道具ちんどうぐ ဆိုတာကတော့ စကားလုံး နှစ်လုံးပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Chin 珍ちん ဆိုတာကတော့ “ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်” စသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရပြီး Dougu 道具どうぐ ကတော့ “ကိရိယာ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
“ထူးဆန်းသော ကိရိယာများ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရုံနဲ့ အဲဒီစကားလုံးရဲ့ အနက်ကို မခြုံငုံမိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ဖယ်ထားလို့မရတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ကျန်သေးတာမို့ပါပဲ။ အသုံးဝင်ပေမယ့် “ဒါကြီးက ရှက်စရာကြီးပါ” ဆိုပြီး လူတွေ မသုံးကြတာမျိုးလည်း အဓိပ္ပာယ် ပေါက်ပါတယ်။
Chindougu အတွေးအခေါ်၏ ပညတ်ချက် (၁၀) ချက်
Kenji Kawakami တီထွင်ခဲ့တဲ့ ထီးဖိနပ် (Source – Touristos)
တကယ့် chindougu အစစ်ကို ခုလို အတုအယောင်တွေများတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လိုက်တုပတဲ့သူတွေကြားထဲကနေ ဘယ်လိုခွဲကြမလဲ? လွယ်ပါတယ်။
တီထွင်သူ Kenji Kawakami နဲ့ International Chindougu Society က သတ်မှတ်ထားတဲ့ chindougu ပညတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်မကိုက် စိစစ်ပြီး ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အသင်းကြီးက သူတို့ရဲ့ Official Website မှာ ဖေါ် ပြသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပညတ်ချက်တွေအရကတော့ အောက်ပါအတိုင်း အကျဥ်းချုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
1. လုံးဝ အသုံး မဝင်ရဘူး
တကယ့်ကို အဆုံးစွန်ကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ တကယ်လို့ တီထွင်မှုတစ်ခုဟာ အမှန်ပဲ လူတွေအတွက် အသုံးဝင်လာပြီး၊ လူတွေကလည်း တစေ အသုံးပြုနေကြတယ်ဆိုရင် chindougu မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Chindougu လို့ သတ်မှတ်ပြီး ဘောင်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ့်အစား ရောင်းလိုက်ရင် ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီး ရကောင်းရမှာပါ။
ရှိရမယ်ဆိုတာက တကယ့်လူလောကမှာ တည်ရှိနေရမယ်ဆို့ ဆိုလိုတာပါ။ စိတ်ကူးထဲမှာပဲ ပုံဖေါ်ထားပြီး အပြင်မှာ လက်တွေ့မပြုလုပ်ခဲ့ရင် မရပါဘူး။ စာရွက်ထဲမှာ ပုံဆွဲထားပြီး ဖြစ်အောင် မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း အသုံးမကျတဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုရဲ့ ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်နေမှာပါ။ လူ့ဘောင်ထဲကလူတွေတွေ့ကြုံ ခံစားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့၊ တည်ရှိလာအောင် အားထုတ်ပေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘယ်လောက်တောင် အသုံးမဝင်ဘူးလဲဆိုတာကို လူတွေ နားလည်သွားကြမှာပါ။
3. လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ကိုယ်စားပြုရမယ်
တစ်ယောက်ယောက်က အတင်းအကျပ်စေခိုင်းလို့ လုပ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ရပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ တွေးခေါ်မှုအရ ထွက်ပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ပုံမှန် စျေးကွက်စီးပွားရေးအရ လိုအုပ်နေတဲ့ ပစ္စည်းအတော်များများကိုတော့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနဲ့ အသုံးဝင်မှု စတဲ့ အချက်တွေကို စဥ်းစားပြီး ထုတ်ထားကြတာပါ။
4. အသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း လူတိုင်းက နားလည်နေရမယ်
သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တစ်ခုခုထဲက (ဥပမာ – ဆရာဝန်တွေ၊ စက်ပြင်သမားတွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ) လောက်ကပဲ ဒါက အသုံးမဝင်နိုင်ပါဘူးလို့ နားလည်နေရုံနဲ့ chindougu လို့ ခေါ်လို့မရသေးပါဘူး။
ဥပမာ – အာကာသထဲမှာ အသုံးပြုဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုထွင်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီပစ္စည်းဟာ အသုံးမဝင်ကြောင်းကို အာကာသနဲ့ဆိုင်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ စစ်ဆေးမှုလိုအပ်နေသေးရင် chindougu မဟုတ်သေးပါဘူး။ သာမန်လူတစ်ယောက်လောက်ကပဲ ကြည့်တာနဲ့ အသုံးမဝင်လောက်ပါဘူးလို့ သဘော‌ပေါက်သွားနိုင်တဲ့ တီထွင်မှုမျိုး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
5. ရောင်းချဖို့ မဟုတ်ရပါဘူး
တီထွင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကို ငွေကြေးနဲ့ ဖလှယ်ပြီး ရောင်းချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ chindougu အဖြစ်ကနေ ပျက်ပြယ်သွားပါပြီ။
6. ဟာသတစ်ခုအဖြစ် အမြဲတမ်း ပြုလုပ်နေစရာမလိုပါဘူး
Chindougu တစ်ခုခုက ရယ်စရာအဖြစ် ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက ဘေးထွက်အကျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟာသဖြစ်ဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက် ဦးတည်ပြီး တီထွင်တယ်ဆိုရင်တော့ chindougu အဖြစ်ခေါ်ဆိုဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုကို ဘယ်လို ဆန်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းသလဲဆိုတာနဲ့ အဲဒီနည်းလမ်းကို လူတွေက အကျွမ်းမဝင်သေးတာမို့ ရယ်စရာအဖြစ် ရှုမြင်သွားတာကိုတော့ တားလို့ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
7. ဝါဒ မဖြန့်ချိရပါဘူး
ဒီပစ္စည်းတွေကို တီထွင်ကြတာဟာ ပြဿနာ တစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းလိုက်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ တီထွင်မှုတွေပါ။ ပြဿနာပိုရှုပ်လာစေနိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုခု၊ ဝါဒတစ်ခုခု (ဥပမာ – ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ အခြားလူအများ သဘောမကျတဲ့ ဝါဒတစ်ခုခု) လိုမျိုးကို ဖြန့်ချိဖို့အတွက် တီထွင်တာ မဖြစ်ရပါဘူး။
ညစ်ညမ်းတဲ့ အောက်လုံးတွေနဲ့ လူတွေကို ကလိထိုးရယ်မောစေတတ်တာမျိုးက chindougu နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အောက်လုံးဟာသတွေ၊ ရယ်စရာတွေဟာ အဆင့်အတန်းနိမ့်ပါတယ်။ သက်ရှိသတ္တဝါတွေနဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့သူတွေ၊ အသားအရောင်တွေ စသဖြင့်အပေါ်မူတည်ပြီး ရယ်စရာအဖြစ်လုပ်တာကိုလည်း chindougu က လက်မခံပါဘူး။
9. မူပိုင်ခွင့် မတင်ရပါဘူး
လူအများလက်လှမ်းမီတဲ့ အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို သိုမှီးတဲ့နေရာတွေမှာ chindougu ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ လွယ်လင့်တကူ လုပ်နည်း နိဿရည်းတွေကို လူတွေ လက်လှမ်းမီရပါမယ်။ ပြန်လည်ဖန်တီးချင်ရင်လည်း ခွင့်ပြုပေးရပါမယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်တည်းက မောင်ပိုင်စီးပြီး မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။
10. Chindougu တွေဟာ ခွဲခြားမှုမရှိရပါဘူး
လူသားတိုင်းကို လေးစားရမှာဖြစ်ပြီး လူမျိုးစု၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရား၊ အသက်အပိုင်းအခြားနဲ့ လူမှုအဆင့်အတန်းတွေ စသဖြင့်ကို ခွဲခြားမယ်ဆိုရင် chindougu အဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ Chindougu အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ လေးစားလိုက်နာမှုရှိရပါမယ်။
အပေါ်က ပညတ်ချက်တွေဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ chindougu ရဲ့ ဥပမာလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
ပြီးရင်တော့ ပညတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်နေသလား၊ မကိုက်ဘူးဆိုတာကိုလည်း စဥ်းစားကြည့်ပါ။
နာမည်ကြီး လူသိအများဆုံး chindougu ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်းက အထူးအဆန်း အိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တကယ့် လူသုံးပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာတွေရှိလာပါပြီ။
ပေါင်မုန့်ကို ထောပတ်သုတ်စားရာမှာ ထောပတ်သုတ်တဲ့ ဓားတွေကို ဆေးစရာမလိုတော့သလို၊ ထောပတ်အလေအလွင့်လည်းနည်းသွားမှာပါ။ တကယ်လည်း အသုံးဝင်တာကြောင့် chindougu အနေနဲ့ ဆက်သတ်မှတ်ဦးမှာလားဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
ကင်မရာမြင်ကွင်းကို (၃၆၀) ဒီဂရီရိုက်လို့ရတာ ခုခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းတွေမှ ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ (ခုခေတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ panorama ဖန်ရှင်ပါပါတယ်။)
360- degree camera hat
ဒီကင်မရာကတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ ဦးထုပ်လို ဆောင်းရတာပါ။ ဖလင်ကင်မရာမို့ ချက်ချင်းတော့ ပုံတွေ ရဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဓာတ်ပုံဆိုင်တစ်ခုခုမှာ သွားပြီး ဓာတ်ပုံကူးရဦးမှာပါ။ ရလာတဲ့ ပုံတွေကိုတော့ (၃၆၀) ဒီဂရီမြင်ကွင်းပြည့် ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် တိပ်နဲ့ကပ်‌ပေးရပါလိမ့်မယ်။
တခါတလေမှာတော့ ramen တွေနဲ့ udon ခေါက်ဆွဲတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အေးသွားအောင် မှုတ်မှုတ် တော်တော်ပူတာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ တအံ့တသြဖြစ်ရတာက ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ခေါက်ဆွဲစားပုံတွေကိုပါ။ ပူပူလောင်လောင်‌ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲကို အပူမလောင်ပဲ ပူပူလောင်လောင်ချည်းကိုပဲ ပူပူလောင်လောင် စားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။
မမှုတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဖြေရှင်းဖို့ လွယ်ပါတယ်။ တူမှာ chindougu ပန်ကာလေး တပ်ထားလိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက ခေါက်ဆွဲချစ်သူတွေနဲ့ ဟော့ပေါ့ ချစ်သူ၊ မာလာရှမ်းကောချစ်သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေလောက်မှာပါ။
လူတွေဟာ အရမ်းအပျင်းကြီးပါတယ်။ အမှိုက်လေးတစ်စတွေ့နေတာတောင် မကောက်ဖြစ်ပဲ၊ ကျော်သွားမိတဲ့ အဖြစ်တွေ လူတိုင်းမှာ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိနေမှာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမှိုက်ကောက်ဖို့ ခက်ခဲတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဗိုက်အရမ်းပူတဲ့ သူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအနေနဲ့ ခါးကုန်းပြီး အမှိုက်ကို ကောက်လိုက်ဖို့က အလွန်ခက်ပါတယ်။
ခုလိုသူမျိုးတွေအတွက် ဒီဖိနပ်လေးကတော့ အသုံးဝင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂေါ်ပြားနဲ့ ကျုံးလိုက်တဲ့ အထဲမှာ ပါလာတာ ကင်းခြေများတစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ သတိထားပါ။ ခြေထောက်ကနေ အပေါ်ကို ကင်းခြေများက ဆက်တက်သွားမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားတွေ ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်တဲ့ အရာရှိပါတယ်။ အဲတာကတော့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတာပါ။ မယုံရင် ကိုယ့်အသိအမျိုးသား တစ်ယောက်ယောက်ကို နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြဖို့ ခိုင်းကြည့်ပါ။ သူကောင်းကောင်း မလုပ်တတ်တာမို့ အကြောက်အကန်ငြင်းဆန်နေမှာပါပဲ။
တချို့အမျိုးသမီးတွေလည်း နှုတ်ခမ်းနီသိပ်မဆိုးတတ်ကြပါဘူး။ မညီပဲဖြစ်သွားတာ၊ သွားကိုပါ ဆိုးမိတာ စသဖြင့် ရှိကောင်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေအတွက် ခုလို နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဖို့ chindougu လေးက အသုံးဝင်မှာပါ။
ကားတစ်စီးက ဗွက်အိုင်တစ်ခုကို ဖြတ်မောင်းသွားလို့ စျေးကြီးလှတဲ့ ရှူးဖိနပ်တွေ ပေကုန်၊ စင်ကုန်မှာကို ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
Gucci လို၊ Air Jordans လိုမျိုး စျေးကြီးတဲ့ ဖိနပ်တွေကို စီးလေ့ရှိတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ မိုးတွင်းဆိုတာ အိပ်မက်ဆိုးပါပဲ။ ခြေအိတ်တွေရေစိုခဲ့ရင်လည်း အလွန်နေရခက်တာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုက ကြမ်းတမ်းတဲ့ အထဲ ပါပါတယ်။ မိုးရွာရင်ရွာ၊ မရွာရင် နှင်းကျ၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ မုန်တိုင်းဝင်နေတာပါ။
ယခင်က ရေလုံနည်းပညာတွေ ကင်မရာတွေမှာ မပါဝင်သေးတာမို့ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုတွေအတွက် ကင်မရာလေးကို ဆောင်းပေးမယ့် ထီးလေးပါ။
ကျောယားတဲ့ ဝေဒနာဟာ တကယ်ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကုတ်ရင်လည်း ဟိုမမီ၊ ဒီမမီ။
တစ်ယောက်ယောက်ကို ကုတ်ခိုင်းပြန်တော့လည်း ဟိုဘက်နားလေး၊ ဒီဘက်နားလေး ပြောနေရတာနဲ့ လိုရင်းမရောက်တော့ပါဘူး။
ဒီအင်္ကျီလေးကတော့ အမှတ်အသားပါပါတယ်။ သူနဲ့အတူ ကဒ်ကလေးတစ်ခုပါပါတယ်။ ကျောယားလာပြီဆိုရင် ကဒ်ကလေးထဲက နေရာလေးကို ထောက်ပြပြီး၊ အဲဒီနေရာကို တစ်ယောက်ယောက်ကို ကုတ်ခိုင်းရုံပါပဲ။
နှာရည်ယိုတာ ဂျပန်မှာ အတွေ့ကြုံရဆုံးသော စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ တစ်ခုထဲ ပါပါတယ်။
နှာရည်ယိုရင် ဖြေရှင်းနည်းက ရှူသွင်းပြီး မျိုချလိုက်တာ၊ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ခုခုနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူကြားသူကြားထဲ ရောက်နေခဲ့ရင်တော့ တစ်ရှူးလိုအပ်မှာပါ။ တစ်ရှူးကုန်သွားမှာကိုလည်း စိတ်မပူရအောင် ခု chindougu လေးကို စမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်များသူတွေ၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်း အသုံးများတဲ့ သူတွေအတွက် မျက်စဥ်းခတ်ရတာ အလုပ် တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ အလေ့အကျင့်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးထဲ‌ရောက်အောင် မျက်စဥ်းကို ခတ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ chindougu မျက်မှန်လေးမှာ မျက်လုံးကို တည့်တည့်ချိန်ထားတဲ့ ကတောလေးတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ကြောင်တွေနဲ့ ကလေးတွေလောက် အပျင်းကြီးတဲ့သူတွေရှိမယ်မထင်ပါဘူး။
ကြောင်ရော၊ ကလေးရော အချိန်မှန် အစာကျွေးရတယ်။ နည်းနည်းလေး နောက်ကျရင်တောင် အော်တယ်။ ဘာအလုပ်မှတော့ ပြန်မလုပ်ပေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်က တရားလွန်ဆော့ကြတာပါ။ ဒီတော့ အလုပ်ခိုင်းမရမယ့်အတူတူ အဝတ်စလေးတွေ တပ်ပေးထားရင် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိုင်ဒီယာလေးကို ယူပြီး အွန်လိုင်းမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ တကယ်ရောင်းချနေပါတယ်။
သွားပွတ်တံဆိုတာ ဘာပါလဲ? အမွှေးတချို့ကို တုတ်တံ တစ်ခုခုမှာ အဆင်ပြေအောင် တပ်ထားတာပါ။
ဒါဖြင့် ကိုယ့်လက်ညိုးဆိုတာရော အစားထိုးအနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? ဒီလို စဥ်းစားကြည့်ရင် ထူးဆန်းတယ်ထင်ရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တချို့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ လက်နဲ့ တံပူထိုးတယ်ဆိုတဲ့ သွားတိုက်ပုံရှိနေတုန်းပါပဲ။
အိမ်ရှင်မတွေကတော့ အတော်လေး အကြိုက်တွေ့ကြမှပါ။ ကြက်သွန်လှီးတဲ့အခါ မျက်ရည်မကျပဲ လှီးလို့ရအောင် အထူးထုတ်ထားတာပါပဲ။ ဗီဒိယိုကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
တကယ်တော့ ကြက်သွန်လှီးရင် မွှန်ပြီး မျက်ရည်ကျရတာဟာ ကြက်သွန်ကထွက်ရှိလာတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ မျက်လုံးထဲ ဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခု မျက်မှန်မှာတော့ ဓာတ်ငွေ့တွေ မျက်လုံးထဲ မဝင်ရအောင် ပန်ကာနဲ့ မှုတ်ထုတ်ပေးတာပါ။
Ramen ခေါက်ဆွဲတစ်ခွက်ကို မြန်မြန်စားခြင်းကတော့ ဟင်းရည်တွေဟာ အင်္ကျီတွေပေါ်ကို အစက်တွေစင်ပြီး ပေကျံစွန်းထင်းခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်တတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေကတော့ သိပ်ဂရုထားလေ့မရှိပေမယ့်၊ သေသေချာချာလှလှပပ ပြင်ဆင်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ အင်္ကျီတွေမှာ ခေါက်ဆွဲဟင်းရည် အစက်တွေ စင်ကုန်တာက အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။ ခု chindougu လေးကတော့ အဲဒီလိုတွေ မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
ဂျပန်မှာ ပြဿနာအရှိဆုံးက ထီးပြဿနာပါပဲ။ နေခြစ်ခြစ်တောက် ပူနေရာကနေ ရုတ်တရက် မိုးရွာချချင် ချတာမျိုးဆိုတော့ ထီးမေ့လာတဲ့ ပြဿနာဟာ လူတိုင်းနေ့စဥ်လိုလို ကြုံတွေ့နေတာပါ။
နက်ခ်တိုင်ကတော့ ဂျပန်မှာ ရုံးအလုပ်ဝင်နေရတဲ့ အမျိုးသားတိုင်း မေ့လို့မဖြစ်တဲ့ အဆင်တန်ဆာတစ်ခုပါပဲ။ ဒီတော့ အမေ့လွယ်တဲ့ ပစ္စည်းကို၊ မေ့လို့ မဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ တွဲပေးလိုက်တာဟာ မေ့တဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
ကိုယ်က တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်လာခဲ့တယ်။ ရထားစီးပြီး အိမ်ပြန်တဲ့ အချိန်လေးကတော့ တကယ် အိပ်လို့ကောင်းတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အိပ်မောကျနေပြီး ကိုယ်ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ကျော်သွားခဲ့ရင်ရော?
Subway Sleep Hat လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဦးထုပ်လေးကတော့ ရထားထဲမှာ အိပ်နေတုန်း ရှေ့ကို ငိုက်မကျသွားအောင် အပြင် နဖူးနေရာမှာလည်း ကိုယ်ဆင်းချင်တဲ့ မှတ်တိုင်ကို ရေးပြီး ကိုယ်ဆင်းချင်တဲ့ မှတ်တိုင်နေရာကိုရောက်ရင် ကိုယ့်ကို နှိုးပေးဖို့ ကပ်ထားလို့ရတာမို့ အဆင်ပြေမှာပါ။
ဆိုင်တွေပေါ်မှာ selfie stick ဆိုပြီး မပေါ်ပေါက်ခင်က chindougu ပါ။
အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုမှာ Kenji Kawakami က အကြံရခဲ့တာပါ။ သူက ကလေးတစ်ယောက်ကို သူ့ကင်မရာလေးပေးပြီး သူ့ပုံကို ရိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သူပေးပြီး ဟိုဘက်လှည့်လိုက်တော့ ကလေးက ကင်မရာယူပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
slefie stick (Source: elPadawan)
ဒါနဲ့ပဲ (၁၉၈၃) ခုနှစ်မှာ “Self Portrait Camera Stick” ဆိုပြီး သူတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန် ကင်မရာ ကုမ္ပဏီကြီး Minolta က သူ့တီထွင်မှုကို ကုန်ပစ္စည်းအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်မှာတော့ Kawakami က သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Chindougu စာအုပ်ထဲမှာ chindougu အနေနဲ့ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
Chindougu ပညတ်ချက်တွေနဲ့ ငြိနေတာမို့ chindougu တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်မယ် မသတ်မှတ်ဘူးဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
Chindougu ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Keji Kawakami ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလို့ ပြောလို့ရမှာပါ။
Kawakami ကို (၁၉၄၆) ခုနှစ် Nara ပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ လေကြောင်းသိပ္ပံပညာရပ်ကို Tokai တက္ကသိုလ်မှာ (၁၉၆၇) ခုနှစ်က ဆည်းပူးခဲ့ပေမယ့် (၁၉၇၀) ပြည့်နှစ်ကာလများရဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအရေးအခင်းတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
(Source – Touristos)
(၁၉၆၀) ပြည့်နှစ်များတုန်းက ဂျပန်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာ ဂျပန်အစိုးရနဲ့ အမေရိကန်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Kawakami ဆိုရင် ရဲတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို မိုလိုတော့ဗ် (molotov) တွေနဲ့ကို ပေါက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလိုမျိုး ပုံမှန်တကျမဟုတ်တဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကပဲ Kawakami ကို chindougu လမ်းကြောင်းထဲကို ဆွဲခေါ်ခဲ့သလားဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း နှစ်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းအားပျော့သွားပြီး၊ လက်ဝဲယိမ်းအဖွဲ့အချို့ဟာလည်း အချင်းချင်းမသင့်မမြတ်ဖြစ်ကုန်ကြတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ (၁၉၈၀) ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ အရင်က သူတို့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ ဂျပန်လူနေမှုဘဝစနစ်ကြီးထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြပါတော့တယ်။ Kawakami ဟာ အလုပ်မျိုးစုံ အောင်လုပ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ စာရေးသားတာနဲ့ တည်းဖြတ်တာပါ။
အဲဒီလို စာရေးသားတာတွေကြောင့် အဲဒီအချိန်တုန်းက နာမည်ကြီးတဲ့ Tsuhan Seikatsu 通販生活つはんせいかつ ဆိုတဲ့ စျေးဝယ်လမ်းညွှန် မဂ္ဂဇင်းမှာ အယ်ဒီတာအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ Kawakami က ရုပ်ပစ္စည်းဗဟိုပြုဝါဒကို ရွံ့မုန်းပါတယ်။
အရာဝတ္ထုတွေဟာ ရောင်းကုန်တွေဖြစ်ကုန်တဲ့ ရုပ်ပစ္စည်းဗဟိုပြုဝါဒကို ကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်နေခဲ့ရတဲ့ Kawakami အနေနဲ့ chindougu ဘက်ကို စိတ်အားထက်သန်လာတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Tsuhan Seikatsu မှာ သူရှိနေတဲ့ အချိန်ကစပြီး သူ့ရဲ့ “အသုံးမဝင်တဲ့ တီထွင်မှု” တွေကို စတင်လုပ်ခဲ့တာပါ။
သူ့အနေနဲ့ စာတိုက်ကနေ ပစ္စည်းတွေအော်ဒါကောက်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာသာ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင် chindougu ဆိုတာ စိတ်ကူးယဥ်အနေနဲ့ပဲ လေထဲမှာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်အဖြစ်သူဟာ မဂ္ဂဇင်းဖေါင်ပြည့်အောင် ဖြည့်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ တစ်လမှာတော့ ဖေါင်မပြည့်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကြံရာမရတဲ့ Kawakami လည်း လွတ်နေတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ရောင်းဖို့မဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်အောင် ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ မျက်စဥ်းခပ်တဲ့ ကတော့မျက်မှန်ပါ။ (သူကိုယ်တိုင် သုံးနေခဲ့တဲ့ဟာပါ။) နောက်တစ်ခုကတော့ ဆိုလာနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ဓာတ်မီးပါ။ (ဓာတ်ခဲပြန်အားသွင်းတာမပါပါဘူး။ နေ့ခင်းမှာပဲ လင်းတာပါ။ ညကျ မလင်းပါဘူး။) ပြီးတော့ “chindougu” လို့ ခေါင်းစဥ် တပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
သူ့တီထွင်မှုတွေက ချက်ချင်းပဲ ပေါက်သွားပါတော့တယ်။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ Kawakami ပြုလုပ်စုဆောင်းထားတာတွေအကုန်ကို ဖတ်ချင်၊ သိချင်ကြပါတော့တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အနုပညာပြပွဲတွေ၊ အင်တာဗျူးတွေ၊ TV ရှိုးတွေကနေ ဖိတ်ကြားခံရပါတော့တယ်။
ရှစ်လလောက်ကြာတဲ့ အခါမှာ the Tokyo Journal ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ စာရေးဆရာ Dan Papia ကသိပြီး Kawakami ရဲ့ အယူအဆတွေကို သဘောကျသွားပါတော့တယ်။
Dan အနေနဲ့ Kawakami ရဲ့ အယူအဆတွေ၊ တီထွင်မှုတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါတော့တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပါ Kawakami ရဲ့ တီထွင်မှုတွေဟာ နာမည်ရပြီးကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Tokyo Journal ရဲ့ စာဖတ်သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ chindougu တွေကို Dan ရဲ့ ရုံးကို ပို့ပါတော့တယ်။ Dan ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ အသိတစ်ခုလက်ကနဲ ဖြစ်သွားလိုက်ပါတယ်။ Dr. Kawakami အနေနဲ့ သူတစ်ယောက်တည်းကပဲ “အသုံးမဝင်တဲ့ တီထွင်မှုတွေ” ကို လုပ်နေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ အနုပညာရပ်တစ်ခုပဲမို့ အခြားသူတွေကိုလည်း ပါဝင်ဖို့ လမ်းကြောင်းဖေါက်ပေးဖို့လိုနေပြီလို့ သဘောပေါက်လာပါတော့တယ်။
(၁၉၉၅) ခုနှစ်မှာ Kenji Kawakami နဲ့အတူ Dan ဟာ International Chindougu Society ကို တည်ထောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ “101 Unuseless Japanese Inventions: The Art of Chindogu” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ပူးပေါင်းထုတ်ဝေလိုက်ကြပါတယ်။ နောက် (၂) နှစ်အကြာ (၁၉၉၇) ခုနှစ်မှာ “99 More Unuseless Japanese Inventions: The Art of Chindogu” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
Chindougu ခေတ်ရောက်သွားတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ သူတို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ထဲကိုလည်း အဖွဲ့ဝင်တွေ အများကြီး‌ရောက်လာသလို Hugh Fearnley-Whittingstall လိုမျိုး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေကို အယူအဆတွေဖြန့်ဖြူးပေနေသူတွေလည်း ပေါ်လာပါတယ်။ Kenjji Kawakami ကိုလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ရုပ်သံအစီအစဥ်တွေကနေပါ အင်တာဗျူးတွေ ဖိတ်လာကြပါတယ်။ BBC ရဲ့ It’ll Never Work? နဲ့ Tomorrow’s World ဆိုတဲ့ အစီအစဥ်တွေမှာ ပင်တိုင် တင်ဆက်သူဖြစ်လာပါတယ်။ ဥရောပဘက်မှာတော့ သူ့ကို လူထူးလူဆန်းဉာဏ်ကြီးရှင်ကြီး တစ်ဦးလို မြင်ကြတာပါ။ အမေရိကဘက်ကတော့ Kawakami ကို ခပ်ကြောင်ကြောင် တီထွင်သူတစ်ဦးလို့ပဲ အမြင်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာတော့ ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေအနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရနိုင်လောက်မယ့် ပစ္စည်းအဆန်းထုတ်သူတစ်ဦးအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။
ဒီလို ကျော်ကြားခဲ့ပေမယ့် Kawakami ဟာ သူ့ရဲ့ တီထွင်မှုတွေကနေပြီးတော့ ပိုက်ဆံရှာတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ (သူတို့ရဲ့ ပညတ်ချက် အမှတ်တစ်ပါ။) မူပိုင်ခွင့်ရုံးတွေမှာ မှတ်ပုံတင်တာမျိုး တစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်သင့်တဲ့ အရာတွေဟာ မူပိုင်ခွင့်တွေအဖြစ်နဲ့ တစ်ဦးတည်း မောင်ပိုင်စီးခံနေရတယ်။ မူပိုင်ခွင့်လောကဆိုတာ လောဘနဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ်လုပ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ လောကပဲ။
ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ၊ ရုပ်သံအစီအစဥ်တွေကနေရခဲ့တဲ့ ငွေကြေးတွေကို ပြန်လှူခဲ့တာမျိုးတွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ ဆောင်းပါးတွေကနေရတဲ့ ငွေကြေးတွေကို သူနှစ်သက်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေကို လှူပစ်လိုက်တာမျိုးတွေ အမျာကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Kawakami ဟာ အိမ်ထောင်မပြုခဲ့ပဲ တစ်ကိုယ်တည်းသာ အရိုးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အိပ်မက်စိတ်ကူးတွေအတိုင်းကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖေါ်ရင်း၊ အခြားစီးပွားရေး လက်ခွဲလေးတွေလည်း လုပ်ရင်းနဲ့ နေခဲ့တာပါ။
Chindougu ဆိုတာ ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့ အသိဉာဏ်အလွှာကို အသိရှိရှိလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အယူအဆတွေဟာ လူအတော်များများကို ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် chindougu ဟာ အချိန်ရဲ့ တိုက်စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါ့မလား?
(၉၀) ပြည့်နှစ်တွေတုန်းက chindougu အကြောင်းကို လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့ပြီး အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ အစည်းအရုံးတွေ၊ ပြပွဲတွေ အများအပြားကို ဂျပန်ပြည်တွင်းသာမှ ဥရောပနဲ့ အခြားအနောက်နိုင်ငံတွေမှာပါ အများအပြားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ chindougu ကို သီးသန့် အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးလုပ်ကြတာမျိုးတွေ နည်းပါးသွားပေမယ့် Facebook လို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာတာနဲ့ အမျှ DIY ဗီဒီယိုတွေလိုမျိုး အိမ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုခုကနေ အထူးအဆန်းလုပ်ပြတာမျိုးတွေကို ကြည့်ရှုသူသန်းနဲ့ချီပြီးရှိလာကြပါတယ်။
Kawakami ကို လူထူးလူဆန်းလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူ့ခေတ်အခါမှာ Digital နည်းပညာဆိုတာ ထွန်းကားကာစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ digital နည်းပညာတွေကို သိပ်မနှစ်သက်ပါဘူး။ သူ့ကို analog လိုပဲ သတ်မှတ်ထားရင်တောင် ရပါတယ်။
“Digital ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေကို ခွဲခြားလိုက်ပြီး သူတို့ရှင်သန်ရာ ကမ္ဘာလေးထဲမှာပဲ ကန့်သတ်ထားလိုက်တာမျိုးနဲ့ တူနေပါတယ်။ လူ လူချင်းဆက်သွယ်လှုပ်ရှားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ရရှိလာတဲ့ ပျော်စရာတွေကို digital ပစ္စည်းတွေသုံးတဲ့ သူတွေမသိပါဘူး။”
“နောက်ပေါ်လာတဲ့ digital နည်းပညာတွေဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ ဘဝတွေကို အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက လူတွေကို အပေါ်ယံတွေပဲ ခံစားချက်တွေပေးနိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း ခပ်တိမ်တိမ်ပဲ ဆက်ဆံရေးတွေထားကြတော့အောင် တွန်းပို့နေတာပါပဲ။” လို့ Kawakami က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း chindougu အနေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံက အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ website တွေရှိပေမယ့် ဂျပန်က အဖွဲ့တွေဆီမှာတော့ website လွှင့်တင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ သူဘာမှ မလုပ်ပေမယ့် အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားနေခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၀) မှာတော့ သူအပြင်မှာ Documentary တစ်ခု အတွက် Kawakami ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုလေး Youtube ပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်။
(၁၅) စက္ကန့်စီသာကြာမြင့်တဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေး (၉) ခုထဲမှာ Kawakami ကတော့ ရှေးခေတ် (၁၈) ရာစုတုန်းက အနောက်တိုင်းသားတစ်ယောက်လို အပြင်အဆင်ဖက်ရှင်နဲ့ပါ။ ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ ChindouguSociety ဆိုတဲ့ Youtube channnel လေးက တင်ထားတာပါ။ ခုဒီဆောင်းပါး ရေးတဲ့အချိန်အထိ subscriber ဟာ (၂၆) ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုလေးတွေတင်ထားခဲ့တဲ့ နှစ်မှာပဲ Kawakami ဟာ ABC news နဲ့ အင်တာဗျူူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Chindougu စာအုပ်တွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ Dan Papia ကတော့ လက်ရှိအထိ The International Chindougu Society မှာ ဥက္ကဌတာဝန်ကို ယူထားတုန်းပါပဲ။ သူ့အနေနဲ့ အသင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles မြို့မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ယခုထက်ထိ website ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေမယ့် တည်ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တိုကျိုက Global COmmunications Arts Institute က ပါမောက္ခတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Chindougu အဖွဲ့အစည်းတွေ ကမ္ဘာအနှံ့အသီးသီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပြီး တချို့ အဖွဲ့တွေဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း “၁၀,၀၀၀” ကျော်တယ်လို့တောင် ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုအနေအထားနဲ့ကတော့ မှန်ချင်မှ မှန်တော့မှာပါ။ အောက်က ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Milwaukee မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ chindougu ပွဲထဲက မှတ်တမ်းလေးကို မြင်ရမှာပါ။
အမေရိကန်တွေရဲ့ chindougu အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုက လျော့ပါးသွားပေမယ့် ပြင်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ မရပ်တန့်ကြသေးပါဘူး။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ The Chindogu Association of France ဆိုပြီးတော့ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့က website တစ်ခုအနေနဲ့ လွှင့်တင်ထားခြင်းမရှိပေမယ့် “The 10 Commandments of Chindogu” ဆိုပြီး စာအုပ်အနေနဲ့ ထုတ်ဝေထားပါတယ်။
Foire Internationale de Marseille မှာလည်း (၂၀၁၃) နဲ့ (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွေမှာ Kawakami အနေနဲ့ ပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အပေါ်က ဗီဒီယိုထဲမှာ (၂၀၁၃) ပြပွဲက မှတ်တမ်းအချို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့မှာ (၂၀၁၆) ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Foire D’Automne ပွဲမှာ chindougu ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အထူးအနေနဲ့ ထည့်သွင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ Palais de Tokyo မှာလည်း (၂၀၁၅) ခုနှစ်တုန်းက အနုပညာမြောက်တဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေအဖြစ် Kawakami ရဲ့ chindougu ပုံတွေကို ထည့်သွင်းပြသခဲ့ပါတယ်။
Chindougu ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ လို/မလို
တကယ့် မောင်းနှင်အားနဲ့ မီးရှူးတိုင်ကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ chindougu ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ Kawakami ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ လူသားတစ်ယောက်မို့ အမြဲတမ်းဆိုတာတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်က သူထွန်းညှိခဲ့တဲ့ မီရှူးတိုင်ကို လက်ဆင့်ရမှာပါပဲ။ မေးစရာရှိတာက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားသင့်သလား ဆိုတာပါ။
Chindougu ဆိုပြီး နာမည်ကြီး ကျော်ကြားလာတဲ့ အချိန်ဟာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတီထွင်မှု အားကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ပိုင်းခြားကာလဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ နေ့စဥ်ပုံမှန် နိစ္စဓူဝ သတ်မှတ်ချက်တွေထဲကနေ ခွဲဖြာထွက်လာတဲ့ တွေး‌ခေါ်ပုံတွေမို့လည်း လူများက အားပေးခဲ့ကြတာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက “ထူးခြားဆန်းပြား တီထွင်မှုများ” လို့ လူအများက မြင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပဲ၊ “ထူးခြားဆန်းပြား ဂျပန်တီထွင်မှုများ” ဆိုပြီး လူအများက ရှုမြင်ခဲ့ကြတာပါ။ စာအုပ်အနေနဲ့ 101 Unuseless Japanese Inventions: The Art of Chindogu ဆိုပြီးတော့တောင် ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်။ တကယ်က chindougu ရဲ့ လူတွေအံ့သြသွားစေနိုင်တဲ့ တီထွင်မှုတွေက Kenji Kawakami ကိုယ်တိုင်ဆီကပဲ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံကြောင့်ဆိုပြီးတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မမှားပေမယ့် မမှန်ပြန်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ အတွေးအ‌ခေါ်တွေနဲ့ အယူအဆတွေဟာ မားကတ်တင်းသမားတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ “weird Japan” ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပုံဖေါ်ခံရပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဖေါက်ထွက်တွေးတောမှုတွေနဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုတော့ မပျောက်ပျက်ရအောင် ထိန်းသိမ်းထားရင် ကောင်းမှာပါ။ Idea Champions မှာ Tim Moore ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဟာ chindougu လိုမျိုး အူကြောင်ကြောင်ပဲ ဖြစ်ပါဦးတော့၊ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ တကယ်အရေးကြီးတာက ဦးနှောက်ကို သန်စွမ်းစေဖို့ များများချိတ်ဆက်၊ များများတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ပဲ ရှေးယခင်က မတွေးဖူးတာတွေ တွေးမိလာကြတာပါပဲ။
တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုတာကတော့ ဒါပါပဲ။ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို မြင်ပြီး အဲဒီချိတ်ဆက်မှုတွေကို တစ်ခုခုဖြစ်အောင် လုပ်ရဲတာမျိုးတွေပါ။ တခါတလေတော့ နေရာကျချင်မှ ကျမှာပါ။ ရလဒ်အနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုမထွက်ပေါ်လာရင်တောင်မှ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ တစ်ခုခုကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
ဂျပန်မှာ အလုပ်ဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Boston Career Forum
September 16, 2021 November 13, 2021 by adminin Articles
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ဘာသာစကားပိုင်းကိုလည်း ပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာ လိုအပ်မယ့် အရည်အချင်းတွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီ။ ဒါဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဘယ်ကနေ စရမလဲ?
Boston Career Forum (BCF) ဆိုတာ ခုလို မျိုး အရည်အချင်းပြည့်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်ဝင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ပေါ်လာတာပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးတွေထဲ ပါဝင်ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အစီအစဥ်တွေအတိုင်း အလုပ်ခေါ်ယူမှုတွေ လာလုပ်တဲ့ ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်ရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမကိုယ်တိုင်က Boston Career Forum ကို သွားခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကို ရရှိခဲ့တာပါ။ တကယ်တမ်းက အလုပ်ရခဲ့ပေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ BCF အကြောင်းကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ မသိပဲ သွားခဲ့တာမို့ အချို့နေရာတွေမှာ မလိုအပ်ပဲ အချိန်တွေကုန် အားထုတ်မိခဲ့တဲ့ ပြဿနာပါပဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်ရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျမတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ခု ဒီဆောင်းပါးကို ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီထဲမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုသာ ကြိုသိခဲ့ရင် ကျမအနေနဲ့ အချိန်အများကြီးကို ချွေတာနိုင်ခဲ့မှာပါ။ ခုဆောင်းပါးထဲမှာတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် :
Boston Career Forum (BCF) ရဲ့ ဝက်ဆိုက်ကို အသုံးပြုပုံ
စတာတွေကို ခြုံငုံမိအောင် ဖေါ်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီးသွားရင်တော့ shuushokukatsudou 就職活動しゅうしょくかつどう (အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း) ဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ရင်ခုန်စရာအခြေအနေအဖြစ် ရှုမြင်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ ယူဆမိပါတယ်။
Boston Career Forum (BCF) ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘယ်သူတွေ BCF မှာ အလုပ်ရှာသင့်သလဲ?
CAREER FORUM WEBSITE
အင်တာဗျူးအတွက် Email များ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ ဂျပန် – အင်္ဂလိပ် (သို့မဟုတ်) ဘာသာစကားတစ်ခုခု ထပ်မံပြီး အရည်အချင်းဖြည့်တင်းထားတဲ့ သူတွေကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အလုပ်ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ပြုလုပ်တဲ့ အခမဲ့ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲနဲ့ အလုပ်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတဲ့ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်၊ တိုကျို၊ လော့စ်အင်ဂျလိစ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို စသဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားမှာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေ၊ အလုပ်ခေါ်ယူပွဲတွေထဲကမှ BCF က အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ HR မန်နေဂျာတွေကို အဲ့ဒီပွဲတွေကို စေလွှတ်ပြီး အင်တာဗျူးတွေလုပ်၊ လူတွေ့တွေရွေးချယ်၊ အဆက်အသွယ်တွေချိတ်ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဝန်ထမ်းသစ်တွေကို ခေါ်ယူတာပါ။
BCF ဆီလာပြီးတော့ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူကြတဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ (ဒီမှာ တစ်ခု ပြောချင်တာက ဘာလို့ “ကြီး” လို့ ထည့်ပြောသလဲဆိုတာပါ။ ကုမ္ပဏီကြီးလို့ ခေါ်ရတာက နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ရုံးခွဲတွေရှိပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို ပြောချင်တာပါ။) နယ်ပယ်တွေအနေနဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတွေ၊ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေ၊၊ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေ၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ဘဏ် စသဖြင့် အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာက အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်က အလွန်မြင့်မားတာကြောင့်လည်း အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်တွေအတွက် ခေါ်ယူမှု အများအပြားကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ့်မှာသာ ဘာသာစကားနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အတွက် အရည်အချင်းကို ဖြည့်တင်းထားရင် အလုပ်ရဖို့ အင်မတန်လွယ်ကူတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ နေထိုင်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပြီး Bachelor’s၊ Master’s ဒါမှမဟုတ် Ph.D ဘွဲ့တွေနဲ့ ကျောင်းပြီးတော့မယ့် (ကျောင်းပြီးထားတဲ့) အလုပ်ရှာနေတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ပွဲပါ။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက ယခင်အလုပ်အတွေ့အကြုံဆိုပြီး ရှားရှားပါးပါး တောင်းတတ်ပေမယ့် ကုမ္ပဏီအတော်များများကတော့ “fresher” “ဘွဲ့ရကာစ” shinsotsugyou 新卒業しんそつぎょう တွေကို ခေါ်ယူတာပါ။
ဘာသာစကားလိုအပ်ချက်အနေနဲ့က အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂျပန်ဘာသာစကားတွေကို နှစ်ခုလုံးတောင်းဆိုလေ့ရှိပြီး နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုတော့ Business Level လောက်အထိ တတ်ကျွမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်လာခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအတော်များများက ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှုကို အလွန်အလေးထားကြလို့ပါပဲ။ အလုပ်ခေါ်ယူမှု အများအပြားထဲက တချို့အလုပ်တွေအတွက် ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကို အလေးပေးခေါ်ယူကြပြီး အချို့အလုပ်တွေကိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကို အထူးအလေးပေးခေါ်ယူကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က ဂျပန်ဘာသာစကားမှာ အားနည်းနေပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဂျပန်ဘာသာစကားမှာ အားသားချက်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ အားနည်းရင်တော့ နည်းနည်းရုန်းကန်ရမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဂျပန်လူမျိုးအလုပ်ရှာတဲ့ သူတွေအပြင်၊ ဂျပန်ဘာသာစကားကို တတ်ကျွမ်းနေတဲ့ အခြားနိုင်ငံတကာက အလုပ်လျှောက်သူတွေနဲ့လည်း ယှဥ်ပြိုင်လျှောက်ထားရမှာမို့ပါပဲ။
အလုပ်စတင်လျှောက်ထားတဲ့ အချိန်ကစပြီး အလုပ်ခေါ်ယူတဲ့ အချိန်အထိ Career Forum Network Website ထဲမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အဆင့်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလတွေမှာ အလုပ်ခေါ်ယူပွဲတွေစတင်လေ့ရှိတာမို့ အောက်က အချက်လေးတွေကို ကြိုတင်ပြင်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ကတော့ Career Forum ထဲမှာ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး BCF အတွက် Register ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ Register လုပ်ဖို့အတွက် အကုန် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အလုပ်ခေါ်ယူပွဲမတိုင်ခင် လပေါင်းများစွာကတည်းက ကြိုလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ Register ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ပွဲကို မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မရှိတာမို့ အကောင့်တစ်ခုကို ကြိုလုပ်ထားတာကတော့ မမှားပါဘူး။
သုံးရက်တာ ပြုလုပ်မယ့် အလုပ်ခေါ်ယူပွဲတွေ ကို တက်ရောက်ဖို့ အတွက်ကတော့ Register ပြုလုပ်ထားဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အကောင့်ဖွင့်ထားတာဟာ အလုပ်လျှောက်ထားတာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ Career Forum Website ထဲမှာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်စားပြုပေးမယ့် Account တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ အဆင့်တွေက သပ်သပ်ပါ။
Career Forum Website ထဲမှာ အကောင့်လုပ်ပြီး၊ BCF မှာ Register လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်စားပြုပေးမယ့် Profile ကို သေချာလုပ်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်လာပါပြီ။
ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ့် အလုပ်ရှာဖွေတာ၊ ကုမ္ပဏီအသီးသီးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး Message အပေးအယူလုပ်တာ စတာမျိုးတွေအပြင် အလုပ်လျှောက်လွှာတင်တာတွေပါ လုပ်လို့ရပါပြီ။ ဒီစာမျက်နှာမှာ အရေးအကြီးဆုံးက “My CFN” ဆိုတဲ့ နေရာပါ။ အလုပ်လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်း အလုပ်ရှာဖွေသူရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာနဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖေါင် “Resume” တွေကို ဖြည့်သွင်းတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုရော၊ ဂျပန်လိုပါ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုရင် အချို့ကုမ္ပဏီတွေက Resume ကို အင်္ဂလိပ်လိုမှသာ လက်ခံပြီး၊ တချို့ကျတော့ ဂျပန်ဘာသာနဲ့ပဲ လက်ခံတာမို့ပါပဲ။ ဂျပန် Resume ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကတော့ ဂျပန်လူမျိုးအသိတွေဆီကနေ အကူအညီများများယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်နေဆဲသူတွေအတွက်ကတော့ အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးအသိမိတ်ဆွေတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Website ထဲက “My Resume” ဆိုတဲ့ နေရာကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အချိန်‌ရောက်လာပါပြီ။ ဖိုင်တစ်ခုခုကို Upload လုပ်လို့မရပဲ ကိုယ်တိုင် စာရိုက်ပြီး ဖြည့်သွင်းရမှာပါ။ စာလုံးအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်လည်းရှိသလို သူ့လိုက်နာရမယ့် Format တွေအတိုင်းဖြည့်ရမှာပါ။
Website ထဲက Resume နေရာမှာ “Education History”၊ “Work History” နဲ့ “Other” ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မယ့် အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ Email၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အိမ်လိပ်စာ စတာတွေကိုတော့ တိတိကျကျ ဖြည့်ထားရမှပါ။ ဒါမှ ကုမ္ပဏီကနေ ကိုယ့်ကို ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာ အမှားအယွင်းမရှိ၊ ကိုယ့်ဆီ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မှာပါ။
Resume ကို အင်္ဂလိပ်လိုရော၊ ဂျပန်လိုပါ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အချို့ကုမ္ပဏီတွေက Resume ကို အင်္ဂလိပ်လိုမှသာ လက်ခံပြီး၊ တချို့ကျတော့ ဂျပန်ဘာသာနဲ့ပဲ လက်ခံတာမို့ပါပဲ။
Resume ကို စောစောစီးစီးဖြည့်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျမတုန်းက ကိုယ်အရင်က ပြင်ထားတဲ့ Pdf၊ Word File တွေကို ဒီအတိုင်းတင်လို့ရတယ်ထင်ပြီး မပြင်ထားမိပါဘူး။ သတ်မှတ်ရက်ရောက်တော့မှ ကိုယ်တိုင် စာရိုက်ဖြည့်ရမှာ ဖြစ်နေတော့ ခေါင်းနပမ်းကြီး အလုပ်ရှုပ်သွားဖူးပါတယ်။ တကယ့်တကယ် အင်တာဗျူးနဲ့ကပ်နေပြီဆိုရင် အသေးစိတ်တွေမှာ အမှားအယွင်းတွေ အများကြီးပါလာနိုင်တာမို့ တတ်နိုင်သမျှ စောစောဖြည့်ထားတာသာ အကောင်းဆုံးပါ။
အချိန်သေချာယူပါ။ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကို အင်တာဗျူးအတွက် ခေါ်မလား၊ မခေါ်ဘူးလားဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ပထမဦးဆုံး အဆင့်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Resume ကို ဖတ်ပြီးတော့မှ ကုမ္ပဏီတွေက ဆုံးဖြတ်တာမို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းအတွက် Resume တစ်ခုရဲ့ အရေးပါမှုက တော်တော် တာသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်မှာ Internship ဆင်းဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိရင် သေသေချာချာ မီးမောင်းထိုးရေးပြတာကောင်းပါတယ်။ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး JLPT လက်မှတ်၊ TOEIC လက်မှတ်နဲ့ ရမှတ်တွေကို ပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
Resume ကို ဖြည့်သွင်းတာပြီးပြီဆိုရင် “My CFN” ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် “Ideal Job Settings” တွေချလို့ရပါပြီ။ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ မြို့၊ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား စသဖြင့်ကို ရွေးချယ်ပြီး Setting ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရာထူး၊ မြို့ စတာတွေလည်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေအနေနဲ့ Marketing၊ PR၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ စသဖြင့်လည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပေမယ့် အများဆုံးအနေနဲ့ကတော့ (၇) ခု အထိပဲ ရွေးလို့ရမှာပါ။
ဘာလျှောက်ရမလဲဆိုတာ သေသေချာချာဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိသေးရင်တော့ CFN Newsletter ကို Signup လုပ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ Website စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။ CFN Newsletter အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Email ဆီကို တစ်ပတ်မှာ (၇) ကြိမ် အလုပ်ခေါ်ယူမှုတွေ၊ လိုအပ်နေရာတွေနဲ့ အခြားသိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပို့ပါလိမ့်မယ်။ Newsletter ရဲ့ အထဲမှာ အလုပ်ခေါ်ယူမှုတွေကို ဂျပန်လိုတွေရေးထားတာများပါတယ်။ တချို့ အလုပ်တွေကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ယူပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ရဲ့ Resume ကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရွေးချယ်သွားရင်လည်း သတိပေးစာပို့ပေးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် CFN Website ထဲကို ဝင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ရွေးချယ်သွားတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ message ပို့ပြီး အင်တာဗျူးတွေအတွက် ချိန်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့ အလုပ်ခေါ်စာကို တွေ့ပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Resume ကို Submit လုပ်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ CFN စာမျက်နှာထဲမှာ ဂျပန်လိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုပါဖြည့်သွင်းပြီးသားမို့၊ ကုမ္ပဏီဘက်က တောင်းတဲ့ တစ်ခုကို တင်ပေးရုံပါပဲ။ ဒီအဆင့်မှာလည်းပဲ Website ကနေပြီးတော့ ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ကို အလိုလျောက်ရွေးပေးတာမို့ တန်းတင်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အချို့အလုပ်ခေါ်စာတွေက မေးခွန်းအချို့ဖြေပြီးမှ Submit လုပ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ မှား/မှန်ရွေးရတာမျိုးတွေလိုပါသလို၊ မေးခွန်းအတိုလေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊။ ကုမ္ပဏီတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းတိုတွေအနေနဲ့ကတော့ ဂျပန်လိုဖြေပေးရတာပါ။ ကျမဖြေခဲ့တဲ့ မေးခွန်းအချို့ကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
弊社へいしゃを 希望きぼうする 理由りゆうを 説明せつめいしてください。
Why do you want to apply to this company?
ဒီကုမ္ပဏီကို ဘာဖြစ်လို့ အလုပ်လျှောက်ချင်တာပါလဲ။
Tell us aboutatime you challenged yourself.
ဘဝမှာ စိမ်ခေါ်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တစ်ခုအကြောင်းပြောပြပါ။
ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် အကြမ်းပြင်ဆင်ထားတာကောင်းပါတယ်။ ချက်ချင်းကြီးဖြေဖို့ အဆင်မပြေသေးရင် Bookmark လုပ်ထားပြီးတော့ မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ “My CFN” စာမျက်နှာမှာ ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ရဲ့ မေးခွန်း link က လာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ Deadline တွေကိုတော့ အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်။
CFN website ထဲကို အလုပ်ခေါ်စာအသစ်တွေက ဆက်တိုက်ထည့်နေတာပါ။ အစကပိုင်းမှာ နည်းနည်းပဲတွေ့ရပေမယ့် မကြာခဏဝင်ကြည့်တိုင်း အလုပ်အကိုင်ခေါ်ယူမှု အသစ်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကတော့ အလုပ်ခေါ်ယူမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အချိန်ဇယားနဲ့ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ CFN Website နဲ့ သက်ဆိုင်မှု မရှိပါဘူး။
ကုမ္ပဏီရဲ့ ဘာသာစကားလိုအပ်ချက် သတ်မှတ်ထားမှုက ဥပမာ JLPT N2 လို့ ဖေါ်ပြထားပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ လျှောက်လိုက်တာ မမှားပါဘူး။ အဓိကက လက်မှတ်တွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာက စစ်ချထားတာပါ။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လိုအပ်ချက်ရှိနေလို့သာ အလုပ်လာခေါ်တာမို့ သူလိုချင်တဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ကိုယ့်မှာ ရှိနေရင် ဘာသာစကားကို လျှော့ပေါ့စဥ်းစားမှာပါပဲ။ တကယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ကိုယ့်ရဲ့ တင်ထာတဲ့ Resume ကို ပယ်ချလိုက်လည်း အခြားကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးကျန်သေးတာမို့ ကိုယ့်ဘက်က Resume တင်ပြီး အလုပ်လျှောက်လိုက်တဲ့အတွက် ဘာမှ အရှုံးမရှိပါဘူး။ ကံ၊ အခွင့်အလမ်းဆိုတာ လူတိုင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိတတ်တာမို့ မမျှော်လင့်တဲ့ ကံကောင်းမှုတွေတောင် ကြုံလာနိုင်ပါသေးတယ်။
Resume တင်ပြီးသွားရင် ကိုယ်က နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်သွားလား၊ မတက်သွားဘူးလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ကိုယ့်ကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရမှာပါ။ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ဆီကို Email ပို့ပြီး ဆက်သွယ်တာများပါတယ်။ တချို့ ကုမ္ပဏီတွေကဆိုရင် ဖုန်းတိုက်ရိုက်ခေါ်တာမျိုး ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ International Call တစ်ခု ဝင်လာပြီး +81 နဲ့ စတဲ့ နံပါတ်ဆိုရင်တော့ ဂျပန်ကနေ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုတဲ့ ဖုန်းပါ။
အကြံပေး ကုမ္ပဏီတွေ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီတွေလိုမျိုး ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ စာမေးပွဲလိုများ စစ်ပြီး ဆန်ကာတင် စစ်တာမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ကိုယ့်ကို အင်တာဗျူးဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အောက်ပါ အချက်နှစ်ချက်ကို ကိုယ့်ကို လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Boston Career Forum ကျရင် အင်တာဗျူးမယ့် အချိန်အတွက် သတ်မှတ်ခြင်း
ကုမ္ပဏီရဲ့ Website သို့မဟုတ် ကိုယ်စား HR တာဝန်ယူပေးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ Website မှာ entry sheet (エントリーシート) ကို ဖြည့်သွင်းခြင်း
BCF မှာ ကိုယ့်ကို အင်တာဗျူးလုပ်ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ဆီကို တိုက်ရိုက် Email၊ ဒါမှ မဟုတ် CFN Website ရဲ့ Message ကနေပြီးတော့ ဆက်သွယ်ပြီး အင်တာဗျူးအချိန် သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
အင်တာဗျူးအတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေပါတဲ့ Message တွေ အနေနဲ့ကတော့ လိမ္မော်ရောင် စာလုံးတွေနဲ့ “Interview” လို့ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရအောင် ထည့်သွင်းထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာ တစ်ခုကတော့ အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့ Message ဟာ အခြား ကြော်ငြာ Message တွေနဲ့ပါ ရောနှောနေတတ်တာမို့ သေသေချာချာ မကြာခဏ စစ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ အင်တာဗျူးရက်ကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ အရင်ဆုံး Entry Sheet ကို ဖြည့်သွင်းရမှာပါ။ Entry Sheet ဆိုတာ တကယ်က အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ Resume မှာ Cover Letter သဘောနဲ့ သွားဆင်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးဝင်ဖို့ အခွင့်အရေးအတွက် entry sheet အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ရဦးမှာပါ။ အထက်တန်းကျောင်းက ကိုယ့်အကြောင်း၊ ဘွဲ့ယူမယ့်ရက်၊ အထူးပြုသင်ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်အကြောင်း၊ ကျောင်းပြင်ပလုပ်ဆောင်မှုများ၊ Internship အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကိုယ့်ဘဝမှာ ခက်ခဲခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ စသဖြင့် ဖြည့်ရတာပါပဲ။ တကယ်လို့ Chrome Browser သာသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်မသိတဲ့ ဂျပန်စာတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် အဓိပ္ပာယ်ကို မောက်စ်တင်တာနဲ့ ချက်ချင်းဖေါ်ပြပေးတဲ့ Rikaikun Entension ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သွင်းထားရင် တော်တော်အဆင်ပြေပြီး အချိန်ကုန်အရမ်းသက်သာပါတယ်။
ကုမ္ပဏီကနေ Entry Sheet ဖြည့်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ အလုပ်ခေါ်ယူတဲ့ Website ကို ဝင်ဖို့ ID နဲ့ Password ကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ Entry Sheet တွေဖြည့်ရတာက မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။
Entry Sheet တွေမှာလည်း ဘယ်နေ့အထိပဲ ဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ Deadline တွေရှိတာမို့ အချိန်တွေကို သေချာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးနားနီးလေလေ အလုပ်ပိုများပြီး မေ့တတ်လာလေလေပါ။ အချိန်ကိုတော့ JST လား EST လားဆိုတာကို သေချာလေး စစ်သင့်ပါတယ်။ JST ဆိုရင်တော့ သူ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက် တစ်ရက်စောပြီး ဖေါင်တင်တာပိတ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ Entry Sheet ဖြည့်ဖို့ အချက်အလက်တွေ ရလာပြီဆိုတာနဲ့ စောစောစီးစီးပြီးအောင် ဖြည့်ထားတာ စိတ်အချရဆုံးပါပဲ။
အကြံပေး ကုမ္ပဏီတွေ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီတွေလိုမျိုး ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ စာမေးပွဲလိုများ စစ်ပြီး ဆန်ကာတင် စစ်တာမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေအနေနဲ့ စာပိုဒ်ဖတ်ရတာတွေ၊ သင်္ချာနဲ့ ဘာသာစကား၊ ‌ယုတ္တိဗေဒတွေးခေါ်မှုတွေ၊ ဉာဏ်စမ်းတွေ စသဖြင့် မျိုးစုံလာနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအလိုက် မေးခွန်းတွေလည်း ကွဲပြားမှာပါ။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရုံးခွဲတွေ (ဥပမာ – Procter & Gamble ရဲ့ ဂျပန်ရုံးခွဲ) ရဲ့ အလုပ်ခေါ်ယူတာမျိုးဆိုရင်တော့ မေးခွန်းတွေက ကံကောင်းစွာနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စာမေးပွဲရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကို အကြောင်းကြားလာပြီး ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ ဖြေရမလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်မသေမချာဖြစ်နေရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီရဲ့ HR ဌာနကို Email နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ဘာသာစကားရွေးချယ်ခွင့်ရှိမရှိနဲ့ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို သေသေချာချာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ကံကောင်းရင် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားနဲ့ ‌ရွေးချယ်ခွင့်ရမှာပါ။ (ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့ ကံကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းလေးတွေ မကြာခဏ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။)
ကျမတုန်းကတော့ အဲဒီစာမေးပွဲတွေအတွက် သေချာပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့တာမို့ သေချာ မပြင်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ အင်တာနက်ထဲက အွန်လိုင်း ဂျပန်ဘာသာစကား စာမေးပွဲလေးတွေ စမ်းဖြေကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲတာတွေက ကျမအတွက် တော်တော်ခက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အရမ်းကြီးစိတ်ညစ်ခံပြီး စာမေးပွဲအတွက် ခေါင်းပူခံနေမယ့်အစား ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံးသေချာဖြေခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ အရည်အချင်းဆိုတာရဲ့ ကွဲပြားမှုကိုပဲ စဥ်းစားပေးဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပါပဲ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ ဘာသာစကားတွေကို အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ အမှားအယွင်းကတော့ ရှိမှာပါ။
အပေါ်က ကျမပြောခဲ့တာကတော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက ကျမကို ပယ်လိုက်ပါတယ်။ တချို့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ သဘောကောင်းပြီး အင်တာဗျူးအဆင့်အထိ ခေါ်ပေးပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ကျမကိုယ်တိုင်က ဂျပန်စာဖတ်ပျင်းသလို စာဖတ်နှေးတာလည်း ပါပါတယ်။
တခါတလေကျရင် အဲဒီလိုစာမေးပွဲတွေထဲမှာ “Personality” ဆိုတဲ့ အပိုင်းလည်း ပါလာတတ်ပါသေးတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ချတတ်သလဲဆိုတာကို မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ စစ်မေးတာမျိုးပါ။ ဒီနေရာမှာ နားလည်ထားရမှာက ဂျပန်က အလုပ်လုပ်တဲ့ ထုံးစံကိုပါ။ ဂျပန်မှာ အစုအဖွဲ့နဲ့ Team နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတာပါ။ တစ်ယောက်တည်း ချွန်ထွက်ပြီး တစ်ကိုယ်တော် အလုပ်လုပ်ဖို့ကို အားမပေးသလို လုပ်လည်း မလုပ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် Personality မေးခွန်းတွေအတွက် ကိုယ်ဖြေတဲ့ အဖြေတွေက “တစ်ယောက်တည်း အလုပ်လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်။”၊ “အဖွဲ့နဲ့ မတိုင်ပင်ပဲ ကုမ္ပဏီထဲက လုပ်ငန်းစဥ်တွေကို လုပ်မှာပါ။” စသဖြင့် အဖြေမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် အင်တာဗျူးခေါ်ဖို့အဆင့်အထိ စဥ်းစားချင်မှ စဥ်စားပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတာ့ ခုလို အဆင့်တွေ အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ပြီး သွားနေရတာက အင်ဝာာဗျူးအတွက်ပါပဲ။
Boston Career Forum အတွက် ခရီးမစတင်ခင်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
BCF ကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Boston မြို့မှာ ကျင်းပတာပါ။ ခန်းမနေရာ အရွှေ့အပြောင်းတွေရှိပေမယ် Boston မြို့ထဲမှာပါပဲ။
အဓိကကတော့ BCF မတိုင်ခင် ခန်းမနေရာနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ကြည့်ပြီး စျေးအသင့်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး နေစရာနေရာ တစ်ခုကို ကြိုတင်ရယူထားဖို့ပါပဲ။ မြို့ကြီးတွေတိုင်းမှာ ပွဲတော်၊ ဒါမှ မဟုတ် လူအသွားများပြီး စည်ကားတဲ့ ပွဲတစ်ခုခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ ဟိုတယ်ခန်းတွေပြည့်ပြီး စျေးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်တွေးတောပြီး ပြင်ဆင်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အလုပ်အကိုင်ပွဲ မစခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာတော့ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရာတွေပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ အနီးကပ် ဒုန်းစိုင်းရတဲ့ ပြဿနာတွေ မကြုံရမှာပါ။
ဝင်ခွင့်လက်မှတ် (စုစုပေါင်း ၃ စောင်)
Resumme မိတ္တူ ၁၀ စုံ (အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ဂျပန်လို စုစုပေါင်း အစုံ ၂၀)
ဆိုင်ရိုက် ဓာတ်ပုံ လိုင်စင်ပုံများ
ဒါတွေအကုန်လုံးကို ပရင့်ထုတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာဆိုရင်‌တော့ ကျောင်းက စာကြည့်တိုက်တွေမှာလည်း ထုတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Convenience Store တွေမှာလည်း ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်းစီရမယ့် အချိန်နဲ့ စက်ကို မကိုင်တွယ်တတ်တာတွေကြောင့် အချိန်ကြန့်ကြာတာတွေဖြစ်နိုင်တာမို့ ကြိုထုတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
နာမည်ကဒ်တွေကတော့ ပွဲကျင်းပမယ့် သက်ဆိုင်ရာခန်းမ ဝင်ပေါက်မှာ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လက်မှတ်အနေနဲ့ကတော့ တစ်ရက်ကို တစ်စောင်နှုန်းနဲ့ (၃) စောင်ရထားမှာပါ။ သက်ဆိုင်ရာပွဲနေ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုလည်း ယူသွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Resume တွေ (၁၀) စုံ မိတ္တူကြိုထုတ်ခိုင်းတာကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အင်တာဗျူးချိန်းထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ သူတို့ ကြိုထုတ်ပြီး ပြင်ဆင်လာပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေကျရင် Resume လာတင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သူတို့နဲ့ ချိန်းထားတဲ့ သူက မလာနိုင်တာ၊ ဒါမှ မဟုတ် ဖြည့်ထားတဲ့ပုံစံတွေမှားယွင်းနေတာ၊ ဒါမှ မဟုတ်လူမရသေးတာစသဖြင့် မျိုးစုံ အကြောင်းပြချက်တွေ အလုပ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီဘက်က ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို မထင်မှတ်တဲ့ ကံကောင်းမှုလေးတွေက ထွက်ပေါ်လာတတ်တာမို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။
ပြီးတော့ ဒါလေးတွေကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့ဦး…
ဘောပင်မင်နက်၊ ခဲတံ (အပိုဆောင်ထားပါ။)
ချောကလက် အင်နာဂျီဘားများ၊ ဗီတာမင် ဂျယ်လီများ (အထဲမှာ အဆာခံနိုင်ဖို့ပါ။)
အမျိုးသမီးများအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းများ
သောကြာနေ့ကနေပြီး တနင်္ဂနွေအထိ သုံးရက်တာ အချိန်ကာလအနေနဲ့ BCF ကကြာမြင့်ပေမယ့် နေ့တိုင်းက တူတူချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သောကြာနေ့ကတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ စားပွဲနဲ့ Booth ဆီသွားပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Resume ကို တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေ့ပါပဲ။ (အွန်လိုင်းမှာ ကိုယ်တင်ခဲ့ပြီး ပယ်ခံရပေမယ့် သွားတင်တာကောင်းပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ကုမ္ပဏီကို ပြရာရောက်သလို၊ တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း ကိုယ့်ကို စဥ်းစားပေးနိုင်မှာပါ။)
ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စာရင်းကို အစဥ်လိုက်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ပွဲနေ့ကျရင် လူတွေများပြီး ကုမ္ပဏီတွေလည်း အများအပြားလာမှာမို့ ကိုယ်သေသေချာချာလေ့လာထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆီကို အရင်သွားပြီးမှ အခြားဘက်ကို အာရုံများသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တကယ် အလုပ်ဝင်ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုရင် သူတို့ ကိုယ့်ကို Email ပို့ဆက်သွယ်ထားတာ မရှိပေမယ့် လူချင်းတွေ့ခွင့်ရတဲ့ အချိန်မှာ သွားရောက်တွေ့လိုက်သင့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းနဲ့ လူချင်းတွေ့ဆုံမှုနဲ့က နှိုင်းယှဥ်မရအောင် ရလဒ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Resume တင်လို့ ရသေးရင် ကိုယ်အသင့်ပြင်ထားတဲ့ Resume ကို တင်ထားခဲ့ပါ။
သောကြာနေ့ကတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ စားပွဲနဲ့ Booth ဆီသွားပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Resume ကို တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေ့ပါပဲ။
နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ Seminar တွေလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေပြီး ကြည့်ချင်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။ အဓိကပြောတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ သူတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ ဆက်လုပ်မယ့် ပရောဂျက်တွေ၊ လက်ရှိခေါ်ယူနေတဲ့ အလုပ်ရဲ့ သဘော သဘာဝတွေလိုမျိုး အကြောင်းအရာတွေပါ။ ကျမကတော့ အဲ့ဒီလို ပွဲတွေ မတက်ဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ အင်တာဗျူးချိတ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြောင်းကိုပဲ အဓိကထားပြီး အာရုံစိုက်ပါတယ်။
စနေနေ့ကတော့ ကုမ္ပဏီအများစုက တကယ့်အင်တာဗျူးကို စလုပ်တဲ့နေ့ပါ။ အွန်လိုင်းမှာကတည်းက ချိတ်ဆက်ပြီးသားသူတွေအပြင် သူတို့ သောကြာနေ့တုန်းကမှ သိလိုက်တဲ့သူတွေလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သောကြာနေ့ရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို လျှော့မတွက်စေချင်တာပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ သုံးရက်တာကာလထဲမှာ အတိုဆုံးနေ့ပါပဲ။ HR မန်နေဂျာတွေလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်နေနိုင်ပါပြီ။ စနေနေ့တုန်းက သူတို့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဆက်လုပ်နေတာ ဖြစ်နေနိုင်သလို ပစ္စည်းတွေကို ပြန်သိမ်းဆည်းနေတာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အင်နာဂျီဘားတွေ၊ ချောကလက်တွေ၊ ဗိုက်တာမင်ဂျယ်လီတွေ ယူလာခိုင်းတာ အကြောင်းမဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစု ခန်းမကို လာစုပြုံတဲ့ ပွဲတွေတိုင်းမှာ အစားအသောက်အေးအေးဆေးဆေးစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အချိန်ကလည်း အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတာမို့ လူတန်းရှည်ကြီးကို စောင့်နေရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တကယ်အရေးကြီးတာတွေလုပ်ဖို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ လစ်ဟင်းသွားမှာပါ။ နှမြောစရာကောင်းပါတယ်။
အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အင်တာဗျူးဝင်တဲ့အခါ မထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် လိုက်နာရမယ့် ဝတ်ဆင်ပုံတွေရှိပါတယ်။ BCF မှာ လာတဲ့ လူတွေဟာ ယူနီဖေါင်းလိုမျိုး အကုန်ဆင်တူဖြစ်နေတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ အောက်မှာတော့ အကျဥ်းချုပ်လေး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
အမျိုးသားတွေကတော့ အနက်ရောင် Suit နဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ နက်ခ်တိုင်ကို ဝတ်ဆင်ရမှာပါ။ အမည်းရောင် Business Bag တစ်လုံးပါရပါမယ်။ (ကျောပိုးအိတ်မရပါ။)
အမျိုးသမီးတွေကတော့ အမျိုးသမီးဝတ် စကပ်တိုနဲ့ Suit ကို အနက်ရောင်ပဲ ဝတ်ဆင်ရမှာပါ။ အမျိုးသမီး ဘလောက်စ်ရှပ်အင်္ကျီကို အဖြူဝတ်ဆင်ရပါမယ်။ ရင်သားပေါ်လို့ မရပါဘူး။ စကပ်တိုကလည်း ဒူးဖုံးဖြစ်ရပါမယ်။ ဒူးအတိ ဒါမှမဟုတ် ဒူးအထက်ရောက်နေလို့ မရပါဘူး။ ဖိနပ်ကလည်း လေဒီရှူးအမည်းပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒေါက်မပါတာကောင်းပါတယ်။ ပွဲနေ့မှာ တစ်နေ့လုံး မတ်တပ်ရပ်နေရမှာပါ။ လက်ဝတ်ရတနာကတော့ မဝတ်ဆင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ နားကပ်ကိုလည်း အသေးဆုံးတစ်ခုသာ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အိတ်အနေနဲ့ကလည်း အမည်းရောင် Business Bag ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လုပ်တဲ့ အလုပ်ခေါ်တဲ့ပွဲမို့လို့ အမေရိကန်တွေချည်းပဲ ပြည့်နေမယ်လို့ထင်ရင်တော့ မှားသွားမှာပါ။ ဂျပန်ကနေလာကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးအလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေရော၊ အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ဂျပန်တွေအပြင် အခြားနိုင်ငံတွေကနေလာကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေပါ အများကြီးတွေ့ရမှာပါ။ မတုန်လှုပ်ပါနဲ့။ ဂျပန်နိုင်မှာသွားပြီး အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်က ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ရတာ အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲ မဟုတ်ပါလား။
BCF မှာ ကျမကို အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ HR မန်နေဂျာတစ်ယောက်ကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အင်တာဗျူးလုပ်ရတာ ပိုကြိုက်တယ်လို့ သူ့သဘောထားကို ပြောပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမြင်နဲ့ သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အင်တာဗျူးတွေမှာ ထုတ်ပြကြလို့ပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုး အလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေကတော့ ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုအတိုင်းပဲ ပြုမူကြတာမို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ အံကိုက်မကိုက် အကဲဖြတ်ရတာ ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အင်တာဗျူးကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထား၊ အသက်မှန်မှန်ရှူပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရင် အကောင်းဆုံးရလဒ်တစ်ခုကို ရယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခုရဲ့ အခိုက်အတန့်လေး ဖြစ်လာမှာပါပဲ။
ခုပေးမယ့် အကြံပြုချက်တွေကို ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ မှတ်ယူထားလို့မရပါဘူး။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ လုပ်တတ်တဲ့ ယေဘုယျ အလေ့အထများလို့ မှတ်ယူထားရင် အဆင်ပြေမှာပါ။
အင်တာဗျူးမှာ သုံးမယ့် ဘာသာစကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအပိုင်းအတော်များများကို ဂျပန်လိုပဲ ပြုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ယူထားပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂျပန်လို ပြောဆိုနိုင်စွမ်းကို ကုမ္ပဏီတွေက လက်မှတ်တွေအပြင် လက်တွေ့ကိုလည်း အလွန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အင်တာဗျူးခန်းမတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Booth တွေက သပ်သပ်စီပါ။ အင်တာဗျူးခန်းဆိုပေမယ့် သပ်သပ်စီမဟုတ်ပဲနဲ့ စားပွဲလေးတွေကို မျက်နှာ တစ်ကွယ်စာအကန့်လေးတွေ ကန့်ထားတာပါ။ ထိပ်စွန်းပိုင်းတွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နံပါတ်တွေကို စာလုံးအမည်းနဲ့ ကပ်ထားပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့ သဘောက အလွယ်တကူရှာရ ခက်နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက ဆင်တူပုံစံတွေပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ပန်းဖလက်တွေမှာပါတဲ့ ခန်းမမြေပုံအညွှန်းတွေကို နားလည်အောင် ကြည့်ထားတာကောင်းပါတယ်။
အချိန်တိကျပါစေ။ ဆယ်မိနစ်ခန့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက်စောပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကို ရောက်နှင့် သင့်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးအခန်း သို့မဟုတ် နေရာကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ တံခါးခေါက်ပါ။ (ကန့်လန့်ကာလေးရှိရင် အနည်းငယ်လှစ်ဟပါ။) ပြီးတော့ “shitsureishimasu 失礼しますしつれいします” ဆိုတဲ့ ခွင့်တောင်းစကားကို ပြောပြီး အခန်းထဲက သူရဲ့ ဝင်ခွင့်ပေးတာကို စောင့်ပါ။
အင်တာဗျူးမှာ သုံးမယ့် ဘာသာစကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအပိုင်းအတော်များများကို ဂျပန်လိုပဲ ပြုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ယူထားပါ။
ကိုယ့်ကို အင်တာဗျူးမယ့်သူထိုင်ပြီးမှ ကိုယ်ကထိုင်သင့်ပါတယ်။ (တခါတလေ ထိုင်ပါလို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။) ခြေချိတ်မထိုင်ရပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို အမျိုးသားဆိုရင် ဒူးပေါ်ကို တင်ထားပြီး၊ အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ လက်ကိုလက်ဖျားနှစ်ခု ထိထားပါ။ လက်မပိုက်ရပါ။ အိတ်ကိုက ဘေးမှာချထားပါ။ ပေါင်ပေါ်မတင်ထားရပါ။
ပထမဆုံးပြုလုပ်ရမှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုက ဂျပန်လိုပဲ ပြောရမှာပါ။ အစကတည်းက သေသေချာချာ ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားပါ။ နာမည်၊ တက္ကသိုလ်၊ အထူးပြုသင်ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်၊ ဘာလို့ ခု ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားရသလဲဆိုတာရယ် ပြီးတော့ အနီးစပ်ဆုံး နိုင်ငံရပ်ခြားအတွေ့အကြုံတွေကိုပါ ထည့်ပြောသင့်ပါတယ်။ ဝါသနာရယ်၊ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတာရယ်ကိုတော့ ထည့်ပြောလည်း ကိစ္စသိပ်မရှိသလို အရမ်းကြီး ရှင်းပြဖို့လည်း သိပ်မလိုအပ်ပါဘူး။
များသောအားဖြင့် အင်တာဗျူးတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ Resume ကို စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားပြီး အဲဒီထဲက အချက်တွေထဲက သူတို့ ပိုသိလိုတာတွေ၊ မရှင်းတာတွေကို မေးခွန်းအနေနဲ့ ပြန်ထုတ်ကြတာများပါတယ်။ ကိုယ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်အတွေ့အကြုံ၊ Internship အတွေ့အကြုံရှိဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သေသေချာချာလေး ချိတ်ဆက်ပြောရမှာပါ။ Internship ဆိုတာကတော့ တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထက် အများကြီးတန်ဖိုးကြီးပါတယ်။
တတ်နိုင်သလောက် ယဥ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်း (Keigo) ကိုသာ သုံးပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ခက်တော့ ခက်ပါတယ်။ ကြိုးစားပါ။
စိတ်အားထက်သန်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံးပြပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အလေ့အထတွေဖြစ်တဲ့ ဌာနတွင်း အလှည့်ကျနေရာချထားမှုတွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေမပြေ စတာတွေကိုလည်း မေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘက်က စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းနေလို့လည်း အရမ်းဝမ်းသာမစောပါနဲ့ဦး။ ဒါဟာ ရလဒ်မဟုတ်သေးလို့ပါ။
အောက်ကမေးခွန်းတွေကတော့ ကျမ အင်တာဗျူးတုန်းက ကြုံခဲ့ရတာတွေပါ။
日本にほん、または 日本語にほんごについて 興味きょうみを 持ったも　きっかけは 何なんですか。
What got you interested in Japan/ Japanese?
ဘယ်ဟာက သင့်ကို ဂျပန်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစေတာလဲ?
Tell me about XYZ experience you had with Japan.
ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်ရဲ့ ( ) အတွေ့အကြုံကို ရှင်းပြပါ။
Tell me about an experience that challenged you.
သင်ရဲ့ အခက်အခဲ စိမ်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါ။
今いままでに経験したことのある 失敗しっぱいについて説明してください。また、その失敗から 学んだまな　ことはありましたか。
Tell me about an experience where you failed. Also, is there anything that you learned from it?
ကျရှုံးခဲ့တဲ့ စိမ်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံတွေရှိရင် ပြောပြပါ။ ကျရှုံးမှုကနေ ဘာတွေသင်ယူဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ?
チームやグループで 働いたはたら　経験について説明してください。
Please give me an example ofatime you worked withateam.
အသင်းအဖွဲ့နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိရင် ရှင်းပြပါ။
葛藤かっとうはどの 風ふうに 扱いますあつか　か。
ပဋိပက္ခတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသလဲ?
ဘာလို့ ဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်ချင်တာလဲ?
自分自身じぶんじしんを 三つみっ　の 言葉ことばで 表すあらわ　としたら何ですか。
သင့်ကို အကောင်းဆုံးဖေါ်ပြနိုင်တဲ့ စကားလုံး ၃ လုံးက ဘာလဲ?
5 年後ねんご、10年後、20年後のキャリアプランは何ですか。できるだけ 具体的ぐたいてきに説明して 下さいくだ　。
Where do you see yourself career-wise in5years? 10 years? 20 years?
နောင် ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ ကြာတဲ့ အခါမှာ သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ထဲမှာ သင်ဟာ ဘယ်နေရာကို ရောက်နေပြီလို့ မျှော်မှန်းပါသလဲ?
အင်တာဗျူးတွေရဲ့ အဆုံးသတ်မှာတော့ အောက်ပါ အချက်နှစ်ခုထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Follow-up အင်တာဗျူး ထပ်လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
အင်တာ‌ဗျူးအောင်မအောင် ရလဒ်ကိုကြည့်ဖို့ နံပါတ်တစ်ခု ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ (ဥပမာ – 200456 စသဖြင့်) သူတို့ ထုတ်ပြန်မယ့် ဘုတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် ကြေညာမှာမို့ အင်တာဗျူး ရလဒ်ကို သွားကြည့်ရမှာပါ။ ကြေညာတဲ့ နံပါတ်ထဲမှာ ကိုယ့်နံပါတ်မပါလာရင်တော့ မအောင်ပါဘူး။
ကျမတုန်းကတော့ ကုမ္ပဏီသုံးခုဆီမှာ အင်ဝာာဗျူးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်လီရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီရယ်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီရယ်နဲ့ အကြံပေးကုမ္ပဏီတို့ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အင်တာဗျူးတွေက မိနစ် (၂၀) ကနေ၊ နာရီဝက်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေမေးရာမှာလည်း စကားပြောက အရမ်းမြန်တာမို့ မနည်းနားထောင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်ဝာာဗျူးတဲ့သူတွေက သဘောကောင်းပုံရကြပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပေမယ့် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျမသာ အရာရာကို ကြိုသိခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဖေါ်ပြမယ့် အချက်တွေကို ကြိုသိချင်ခဲ့မိမှာပါ။
ကိုယ်အင်တာဗျူးဝင်မယ့် ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို သေသေချာချာသိအောင် လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့ အဲဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တိတိကျကျ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြနိုင်ဖို့ပါ။ “ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ချင်လို့” ဆိုလောက်ပဲနဲ့က လုံလောက်တဲ့ အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဘယ်အချက်တွေ၊ ဘာလုပ်ငန်းတွေက ကိုယ့်ကို ဆွဲဆောင်သလဲဆိုတာကို ပြောပြသင့်တာပါ။
အင်တာဗျူးကို ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်ယောက်၊ ဒါမှ မဟုတ် ဂျပန်စကားပြောတတ်သူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ထားခဲ့သင့်တာပါ။ မဟုတ်ရင် တကယ့်အင်တာဗျူးရောက်တဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိ၊ စကားလုံးတွေပျောက်နေတဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီကိုလည်း မေးခွန်းတွေပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်သိလိုတဲ့ အချက်တွေကို သူတို့ အလှည့်ပေးတဲ့အခါ မေးမြန်းတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို လှစ်ဟပြရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ တကယ်သိချင်တဲ့ မေးခွန်းဆိုရင်လည်း ကုမ္ပဏီက သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူက ဖြေပေးတာမို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမှာပါ။
အရမ်းကြီး “ဂျပန်” ယောင်မဆောင်ပါနဲ့။ သင် ဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်မှန်း သူတို့ အစကတည်းက သိပါတယ်။ လေးစားမှုနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတွေက အဓိကပါ။
အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ အင်တာဗျူးတွေပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ရလဒ် (၃) ခု အဖြေအနေနဲ့ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ကမ်းလှမ်းလာပါပြီ။ အချို့ကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို စဥ်းစားဖို့ ရက်အနည်းငယ်အချိန်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
BCF ပြီးနောက် နောက်ထပ် အင်တာဗျူးအတွက် ထပ်ချိန်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျမတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တိုကျိုမှာရှိတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီက တိုကျိုရုံးမှာ အင်တာဗျူးလာဖို့ ခေါ်တာပါ။ ခရီးသွားလာစားရိတ်၊ လေယာဥ်လက်မှတ် အလုံးစုံနီးပါးကို ကုမ္ပဏီက ကျခံပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ BCF တုန်းက ချိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ဆီလည်း သွားခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ခန့်ထားခြင်း မခံရပါဘူး။ ဒါကတော့ တကယ်တမ်းကျ ကိုယ်အရမ်းကြိုးစားထားပြီးမှ မရခဲ့တာမို့ စိတ်ပျက်သွားတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသိထားရမှာက ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်း အလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာ ကုမ္ပဏီအများအပြားကို လျှောက်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီအများအပြားက ငြင်းပယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ သင့်ကို တော်တယ်၊ ညံ့တယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲ၊ ကုမ္ပဏီက ရှာဖွေနေတဲ့သူနဲ့ သင်နဲ့ ထပ်တူ မကျတာမျိုးပါ။
ငြင်းပယ်လိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆီကို Email ပို့ဆက်သွယ်ပြီး ငြင်းပယ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ “feedback” မှတ်ချက်တွေအပေါ်ကို မူတည်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ဘာပြောပြော ဆောင်းပါးအရှည်ကြီးကို အချိန်ယူဖတ်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး နေထိုင်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်တော့ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ဆီကို ဦးတည်ပြီး ကြိုးစားနေတာကို မလျှော့ပဲ ဇွဲနဲ့ ဆက်တိုက်လုပ်ဖို့သာပြောချင်ပါတယ်။ ကံကောင်းမှုလေးတွေက မထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလိုအလျောက်တော့ ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားတဲ့သူအတွက်ပါ။